မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကုသရန်အတွက် glutamatergic ဆေးများ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
မူးယစ်ဆေးနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (2013) ၏ကုသမှုများအတွက် Glutamatergic ဆေးဝါးများ
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ 100(4): 801-810 ။ 2011 ဧပြီလ 22 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2011.04.015
အမ် Foster သံလွင်,1,* ရစ်ချတ်အမ် Cleva,1 ပတေရုသဒဗလျူ Kalivas,2 နှင့် ရောဘတ်ဂျေ Malcolm3
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ
သမိုင်းကြောင်းအရ၊ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအများစုသည်အစားထိုးခြင်း (နိုက်ကတီးနစ်အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ် opioid ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု) နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် monoaminergic သို့မဟုတ် endogenous opioidergic neurotransmitter system များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းထားပြီ glutamatergic ဂီယာအပေါ်သရုပ်ဆောင် ligands လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုအလားအလာအဖြစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအဖြစ်အပြုအမူစွဲလမ်း၏အလားအလာများဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြစုဆောင်း။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆေးဖက်ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုအနှစ်ချုပ်ရန်နှင့်လက်ရှိအတည်ပြုထားသောသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်အတည်ပြုချက်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသော glutamatergic ဆေးများ၏ယေဘုယျလက်တွေ့ထိရောက်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးလိမ့်မည်ဟု glutamatergic ဂီယာအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆေးဝါးများ acamprosate, N-acetylcysteine, D-cycloserine, gabapentin, lamotrigine, memantine, modafinil နှင့် topiramate ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ glutamatergic neurotransmission ၏ခြယ်လှယ်အတော်လေးနုပျိုပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ကုသမှုများအတွက်တိုးတက်လာသောကုထုံးအေးဂျင့်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာနည်းလမ်းကြောင်းကောက်ချက်ချ။
keywords: မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ အမူအကျင့်စွဲခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ဆေးဝါးဗေဒကုထုံး၊
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှသတ်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးစွဲမှု ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို (American Psychiatric Association, 2002မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရည်ရွယ်ထားသည်ထက်ပိုမိုများပြားစွာသောက်သုံးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်း (သို့) လျှော့ချခြင်းတွင်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများ၊ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိနေသည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအထူးသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သည်းခံစိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများ။ လူမှုရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းစသည့်မမြင်ရနိုင်သောလူသားဝါဒဆိုင်ရာအချက်များအပြင်မိသားစုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခြင်းနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းများအပါအ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကြီးမားသောလူမှုစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြီးမားစေသည် (Cartwright၊ ၂၀၀၈; Gilson နှင့် Kreis, 2009; Malliarakis နှင့် Lucey, 2007; ရယ် et al။ , 2009; Spanagel၊ ၂၀၀၉; Thavorncharoensap et al။ , 2009). မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏နောက်ကွယ်ရှိအာရုံကြောအလွှာများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သော“ အမူအကျင့်” စွဲလမ်းမှုများ (ဆိုလိုသည်မှာရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊()ဂရန် et al။ , 2010a).
ယနေ့အထိစွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရာတွင်ကူညီရန်တီထွင်ထားသောဆေးများသည်သာမန်အောင်မြင်မှုသာရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါများကိုကုသရန်ဆေးဝါးအခြေပြုချဉ်းကပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသောသိပ္ပံနည်းကျအတားအဆီးများတွင်ဆေးဝါးလိုက်နာမှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ ကုသမှုအဖွဲ့များအတွင်းရှိဆေးဝါးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်သိမြင်မှု - အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်လုံလောက်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာဆေးဝါးများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည် (Koob et al။ , 2009; Montoya နှင့် Vocci, 2008; O 'Brien, 2008; ရော့စ်နှင့် Peselow, 2009; Zahm, 2010) ။ အခြားဆေးကုသမှုအခြေအနေများအတွက်အတည်ပြုပြီးသောအမျိုးမျိုးသောအတန်းအမျိုးမျိုး၏ဆေးမြောက်မြားစွာကိုလက်ရှိတွင်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်အလားအလာရှိသောအထောက်အကူများအနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိယခုအချိန်အထိကုသမှုအတွက်အထူးအတည်ပြုထားသောတစ်ခုတည်းသောဆေးဝါးများမှာ varenicline, buproprion နှင့်နီကိုတင်းအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်၊ ဘိန်းမှမှီခိုမှုအတွက်ကြာရှည်စွာပြုသည့် opioids (ဆိုလိုသည်မှာ methadone သို့မဟုတ် buprenorphrine) နှင့်အရက်မှီခိုမှုအတွက် disulfiram, naltrexone နှင့် acamprosate များအတွက်ကုထုံးများ။ ကိုကင်း၊ မက်သာဖီတမင်း (သို့) ဆေးခြောက်ကိုစွဲလမ်းမှုကုသရာတွင်ဆေးကုသရန်အတွက်မည်သည့်ဆေးမျှလက်ရှိအချိန်တွင်အတည်ပြုထားခြင်းမရှိပါ။
ယခုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်မှု၏ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့်စွဲစေသည့်ရောဂါများကိုကုသရာတွင် glutamatergic transmission အပေါ်လုပ်ဆောင်သောဆေးများ၏ယေဘုယျလက်တွေ့ထိရောက်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤဆေးများတွင် acamprosate၊ N-acetylcysteine၊ D-cycloserine, gabapentin, lamotrigine, memantine, modafinil နှင့် topiramate တို့ပါဝင်သည်။ ဤဆေးများစွာတွင် neurotransmitter systems များစွာပါဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ D-cycloserine မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှ glutamatergic transmission သို့မဟုတ် glutamate receptors ကို ရွေးချယ်၍ ပစ်မှတ်ထားသည်ကိုမသိနိုင်ပါ။ သို့သော်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်တိ့ုတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှရရှိလာသောအစောပိုင်းသက်သေအထောက်အထားများအရမူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ပေးခြင်း၊ အားဖြည့်ခြင်း၊Bird နှင့်လောရင့်, 2009; Bower et al။ , 2010; ဓာတ်ငွေ့နှင့်သံလွင်, 2008; Kalivas et al။ , 2009; Moussawi နှင့် Kalivas၊ ၂၀၁၀; သံလွင်, 2009, 2010; Reissner နှင့် Kalivas, 2010; Tzschentke နှင့် Schmidt က, 2003; Uys နှင့် LaLumiere, 2008) ။ glutamatergic transmission နှင့် glutamate receptors ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့, စာဖတ်သူကိုလက်ရှိပြissueနာအတွက် Sanacora အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရည်ညွှန်းသည် (ထုတ်ဝေသူ - မှန်ကန်သောစာမျက်နှာနံပါတ်များကိုဒီမှာထည့်ပါ) ။ ထို့အပြင်သေးငယ်သော်လည်းကြီးထွားလာသောဤဆေးဝါးများသည်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းသည့်လောင်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူစွဲချက်များကိုကုသရန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်လေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။
2. ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်မှုများကုသရန် glutamatergic ဆေးများ
2.1 ။ Acamprosate
2.1.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Acamprosate (calcium acetylhomotaurine) သည် notapecific γ-aminobutyric acid (GABA) မှ agonist homotaurine မှရရှိသည်။ သွေး - ဦး နှောက်အတားအဆီးကို ဖြတ်၍ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်မော်လီကျူးသည် N-acetylated ဖြစ်ပြီးအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှဒြပ်ပေါင်းများ၏စုပ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကယ်လ်စီယမ်ဆားအဖြစ်ရေးဆွဲထားသည်။ ဤဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိသော်လည်း၎င်း၏စုစုပေါင်းဇီဝရရှိနိုင်မှုမှာ (၂၀% <၂၀%) ညံ့ဖျင်းဆဲဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသရန်တစ်နေ့လျှင် ၂ ဂရမ်မှဂရမ်အထိလိုအပ်သည်။ Acamprosate ၏ Pharmacological ယန္တရားများစွာကိုအဆိုပြုထားသော်လည်းပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှုများအရ acamprosate သည် glutamatergic ယန္တရားများမှတစ်ဆင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟု Zeise နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမှတင်ပြခဲ့သည်။Zeise et al။ , 1990, 1993) ။ ဤရွေ့ကားစုံစမ်းစစ်ဆေး acamprosate vivo အတွက် cortical အာရုံခံပေါ်သို့ L-glutamate ၏ iontophoretic လျှောက်လွှာအားဖြင့် evoked အာရုံခံပစ်ခတ်မှု၏စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချနှင့် glutamate နှင့် N-methyl-D-aspartate (NMDA) က evoked excitatory postsynaptic အလားအလာ (EPSPs) တားစီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ acamprosate ၏ NMDA ရန်ကဲ့သို့သောယန္တရားအတွက်ထပ်ဆင့်အထောက်အထားများမှာဤဒြပ်ပေါင်းသည် Hippocampal neuron များရှိ NMDA-evoked excitatory postsynaptic current (EPSCs) ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေကြောင်းသရုပ်ပြလေ့လာမှုများမှရရှိသည်။Rammes et al။ , 2001) နှင့်တက် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို non-ယှဉ်ပြိုင် NMDA ရန်တိုက်လေယာဉ် MK-801 နှင့်အတူကုသမှုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအလားတူဖက်ရှင်အတွက် NMDA အဲဒီ receptor subunit စကားရပ်Putzke et al။ , 1996; Rammes et al။ , 2001) ။ သို့သော်အချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် hippocampus ၏ CA1 ဒေသရှိ NMDA-mediated synaptic transmission အတွက် acamprosate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရပါ။Popp နှင့် Lovinger, 2000အခြားသူများကို acamprosate အမှန်တကယ် hippocampus ၏ CA1 ဒေသ၌ NMDA အဲဒီ receptor function ကို potentiates ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြစဉ်)),Madamba et al။ , 1996) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်Berton et al။ , 1998) ။ ဤကိုက်ညီမှုမရှိသော electrophysiological တွေ့ရှိချက်များရှိနေသော်လည်းစည်းနှောင်ထားသောလေ့လာမှုများက NMDA receptor ၏ spermidine, glutamate- နှင့် / သို့မဟုတ် MK-801-sensitive sensitive site နှင့် acamprosate ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။အယ်လ်ကာတာရီ et al။ , 1998; Harris က et al။ , 2002; Naassila et al။ , 1998) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော acamprosate မကြာခဏတစ်ခု "NMDA modulator ကို" အဖြစ် nonspecically ရည်ညွှန်းသည်အဖြစ်ပုံ 1) ။ acamprosate ၏တိကျသောမော်လီကျူးပစ်မှတ် (s) ကိုနေဆဲခိုင်မြဲစွာထူထောင်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့် (Kiefer နှင့်မန်း, 2010; Reilly et al။ , 2008), လက်ရှိသီအိုရီအများစု acamprosate နာတာရှည်အရက်စားသုံးမှုကနေရရှိလာတဲ့ excitatory နှင့် inhibitory အမိုင်နိုအက်ဆစ် neurotransmission အကြားမညီမျှမှုကိုပြန်လည်ကြောင်း positဒီ Witte et al။ , 2005; Kiefer နှင့်မန်း, 2010; Spanagel et al။ , 2005; ha ။ et al။ , 2010).
စွဲလမ်းမှုကိုတားဆီးပေးသောဆေး ၈ မျိုးကိုအသုံးပြုထားသည့် glutamatergic ယန္တရားများ။ Acamprosate ဆေး၊ - acamprosate ၏မော်လီကျူးပစ်မှတ် (များ) သည်မသေချာမရေရာနိုင်သော်လည်း NMDA receptors ၏လုပ်ဆောင်မှုကို modulates နှင့်အကြားမျှတမှုကိုပြန်လည်ပေးသည်ဟုလေ့လာမှုများစွာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ...
၂.၁.၂ ။ လက်တွေ့ထိရောက်မှု
အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းမှရောဂါပြန်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရာတွင်လက်တွေ့အာနိသင်ထိရောက်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးသရုပ်ပြမှုကို ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။Lhuintre et al။ , 1985) ။ နှစ်များတစ်လျှောက် acamprosate သည်သေးငယ်သောမှအလယ်အလတ်အထိအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကိုပြသသည်။ မကြာသေးမီ meta-analysis တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအရက်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ကနေဒီ et al။ , 2010; Kiefer နှင့်မန်း, 2010; Kranzler နှင့် Gage, 2008; လူကို et al။ , 2008; Mason ဆိုနှင့် Heyser, 2010a, b; Rosner et al။ , 2010; Snyder နှင့် Bowers, 2008) ။ ထိရောက်မှုရှိမရှိကိုလေ့လာရန်အလို့ငှာပါးစပ်ဖြင့်ဇီဝမရရှိနိုင်မှုကြောင့် Acamprosate ပမာဏ (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ဂရမ်မှ ၃ ဂရမ်ခန့်သာ) ရှိသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကအရက်ကိုမှီခိုနေသည့်လူနာ ၁၂၀၀ ကျော်အားဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ပေါင်းစပ်လေ့လာမှု (ပေါင်းစပ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများလေ့လာမှု၊ သို့မဟုတ်“ COMBINE” လေ့လာမှု) က acamprosate သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရထပ်မံဖြစ်ပွားမှုလျော့ကျစေသည့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် စီမံခန့်ခွဲထားသော setting (Anton et al။ , 2006) ။ အခြားမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရအရက်သောက်သုံးခြင်း (သို့) တွန်းအားလျှော့ချခြင်း (သို့) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရာတွင် acamprosate ၏ထိရောက်မှုမရှိခြင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ဒိုနိုဗန် et al။ , 2008; Laaksonen et al။ , 2008; Morley et al။ , 2006; ရစ်ချတ်ဆန် et al။ , 2008) ။ အထူးသဖြင့်ယခင်အပြုသဘောတွေ့ရှိချက်များ (အထက်တွင်ညွှန်းထားသည့် meta-analysis အတွက်အကျဉ်းချုပ်) ၏ဤအနှုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်များ၏အကြောင်းပြချက်များကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံနေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက COMBINE လေ့လာမှုတွင်သိသာထင်ရှားသော“ ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှု” သည် acamprosate ၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။Weiss et al။ , 2008), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသက်တာ၏အရည်အသွေးအဖြစ် nondrinking ဆက်စပ်ရလဒ်များအစီအမံအတွက်တိုးတက်မှုများအမှန်တကယ် COMBINE လေ့လာမှုမှာ acamprosate- နှိုင်းယှဉ်ပါရလဒ်များအရအိပ်ယာ - ကုသလူနာခဲ့ကြသည်LoCastro et al။ , 2009) ။ အခြားသူများက detoxification အပြီးတွင် acamprosate ကုသမှုစတင်ခြင်းသည်အရက်သုံးစွဲမှုကာလအတွင်းပေးသည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်စွဲအားလျော့ခြင်းကိုလျှော့ချသည်ဟုအကြံပြုကြသည် (Kampman et al။ , 2009ပေါင်းစပ်လေ့လာမှုမှာပြုသကဲ့သို့) ။ တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သောက်ရန်လိုအပ်ချက်သည်လူနာအချို့အတွက်လိုက်နာရန်အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ကျဝေဒနာသည်များအကြားကုသမှုကိုစတင်ရန်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုမရှိသောအရက်သမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုများအကြားကုသမှုကိုစတင်ရန်စိတ်ကျဆင်းမှုသည် acamprosate- ကုသသောလူနာများအားကုသမှုလိုက်နာမှုကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည် (Lejoyeux နှင့် Lehert, 2011) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသင့်အတင့်သောက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ အပြည့်အဝဆေးကြောခြင်းကုသမှုရည်မှန်းချက်ထားရှိခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်မှုအချက်များသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက acamprosate ဖြင့်ကုသသောလူနာများအတွက်အကျိုးရှိစေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။Mason ဆို et al။ , 2006; Mason ဆိုနှင့် Lehert, 2010) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများနည်းတူလူနာ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုံ့ပြန်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ acamprosate အပေါ်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုပြအများဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းအရက်သမားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဤအကြိုးရှိလှုံ့ဆျောမှု, နည်းစနစ်, ရလဒ်ကိုတိုင်းတာ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းမျိုးဗီဇအချက်များတိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်အပိုဆောင်းသုတေသနရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်နေပါသည်။
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲလမ်းစေခြင်း (သို့) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကုသရာတွင် acamprosate ၏အသုံး ၀ င်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အကြီးစားလေ့လာမှုများသည်မတည်ရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များအရလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင် acamprosate ၏အလားအလာကောင်းကိုထောက်ခံသည် (Raj၊ ၂၀၁၀) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Kampman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကိုကိန်း - မှီခိုလူနာ ၆၀ ကိုမျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သည့်ကုသမှု၌ acamprosate သည်ကိုကိုင်းသုံးစွဲမှု၊ တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်ရုတ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (Kampman et al။ , 2011) ။ အကြာင်းကြွက်သားလေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်အရ acamprosate သည်ကင်းကင်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် cue-primed ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအားပြသခဲ့သည်။Bower et al။ , 2007; Mcgeehan နှင့် Olive, 2003, 2006) ။ သို့သော် Kampman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှနမူနာအရွယ်အစားနှင့်မြင့်မားသောကျောင်းထွက်နှုန်းများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် acamprosate သည်ကိုကင်းမှီဝဲသူတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ကိုကင်းမှီဝဲမှုကိုကုသရာတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်း၊
၂.၂ ။ N-acetylcysteine ​​(NAC)
2.2.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
NAC သည်သဘာဝအရအမိုင်နိုအက်စစ် cysteine ​​၏ N-acetylated ဆင်းသက်လာသည်။ တစ်ချိန်က ဦး နှောက်အပါအ ၀ င်အဓိကကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအတွင်း၌ NAC သည် free cysteine ​​ဖြစ်ပေါ်ရန် deacetylated နှင့် cysteine ​​မော်လီကျူးနှစ်ခုလုံး၏ homodimerization သည် cystine ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် NAC သည် cystine pro-drug အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် cystine-glutamate exchanger (မကြာခဏ system xc- အဖြစ်ရည်ညွှန်း) သည်နှင့် glutathione ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။မုန့်ဖုတ်သမား et al။ , 2002; McBean, 2002) ။ ဒီယန္တရားကနေ NAC ဟာ mucolytic agent နဲ့ acetaminophen အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကုသမှု၏လက်တွေ့ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော် glutathione ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အပြင် system xc- သည် glia cells အတွင်းရှိဆဲလ် cystine နှင့် glia အတွင်းမှ extracellular ပတ်ဝန်းကျင်သို့ intracellular glutamate သို့သယ်ဆောင်သော antiporter protein တစ်ခုဖြစ်သည်။ NAC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရှည်လျားသောကိုကင်းထုတ်ယူမှုကာလအတွင်းလျော့နည်းသွားသည့် extracellular glutamate ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။မုန့်ဖုတ်သမား et al။ , 2002, 2003; ကော် et al။ , 2008; Madayag et al။ , 2007; Melendez et al။ , 2005; Moran et al။ , 2005) ။ extracellular အချိုမှုအဆင့်ဆင့်၏ဤ "ပုံမှန်" presynaptic လွှတ်ပေးရန် - ထိန်းညှိအုပ်စု II ကို metabotropic အချိုမှု receptors (mGluR2 / 3, အပေါ် glutamatergic သေံပြန်လည် Moran et al။ , 2005; မြင် ပုံ 1) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular အချိုမှုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့နောက်ဆက်တွဲကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားပြန်လည်လက်ခံရန်စူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှုစွမ်းရည်ကိုတားဆီးထားသည်။အာမင် et al။ , 2011; မုန့်ဖုတ်သမား et al။ , 2003; ကော် et al။ , 2008; Madayag et al။ , 2007; Moran et al။ , 2005; Moussawi et al။ , 2009).
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှဤတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၊ တဏှာ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လူ၏စွဲလမ်းမှုအားပြန်အားဖြည့်မှုကိုလျှော့ချရန် NAC ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သေးငယ်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်လေ့လာမှု (n = ၁၃ ဘာသာရပ်များ) တွင် NAC (၁၂ ရက်မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်နှစ်ရက်အတွက်) ကိုကင်းစွဲသူများကကောင်းစွာသည်းခံပြီးကိုကင်းသုံးစွဲမှု၊ တဏှာသုံးစွဲမှုအပေါ်မိမိကိုယ်မိမိအစီရင်ခံမှုနည်းပါးလာမှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများ (LaRowe et al။ , 2006) ။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (= = ၁၅-၂၃ ဘာသာရပ်များ) မှ NAC အလားတူဆေးများကိုကိုကင်းစွဲသူများကကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်ကုသမှုကိုရှာဖွေသည့်ပြင်ပလူနာအားကိုးအားထားသည့်ကိုကိုးအားထားသည့်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် (အာမင် et al။ , 2011; LaRowe et al။ , 2007; Mardikian et al။ , 2007) ။ သို့သော်အရေးကြီးသည်မှာမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောရှေ့ပြေးလေ့လာချက်အရ NAC သည်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဒီယိုများ၏ဗီဒီယိုနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကိုကင်း“ မြင့်မားသော” သို့မဟုတ်“ အလျင်အမြန်” ၏ပုဂ္ဂလဒိfeelings္ဌာန်ခံစားချက်များကိုမလျှော့ချနိုင်သော်လည်းပြင်းထန်သော IV ကိုကင်းထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတဏှာကိုလျော့နည်းစေသည် (အာမင် et al။ , 2011) ။ ဤရလဒ်သည် LaRowe, Mardikian နှင့် NAC ၏ ceu-evoked cocaine တုန်ခါမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သဘောမတူညီဟုထင်ရသော်လည်းအာမင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏နမူနာအရွယ်အစားမှာအလွန်နည်းသည် (n = ၄ ဘာသာရပ်များ) ) က၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကန့်သတ်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဤပဏာမရလဒ်များသည် NAC သည်ကိုကင်းစွဲမှုကိုကုသရာတွင်အလားအလာရှိနိုင်ကြောင်းအားပေးသောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ဤရလဒ်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာအထိအတည်ပြုရန်အပိုဆောင်းစင်တာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများလိုအပ်သည်။
အခြားအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်သေးငယ်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု (n = ၂၉ ဘာသာရပ်) သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကူညီရာတွင် NAC ၏ထိရောက်မှုကိုစုံစမ်းခဲ့သည် (Knackstedt et al။ , 2009) ။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရ NAC ကုသမှု (တစ်နေ့လျှင် ၂၄၀၀ မီလီဂရမ်) သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်သောစီးကရက်အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆေးလိပ်သောက်သည့်စီးကရက်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်သော်လည်း NAC ကုသမှုသည်ပလာစမာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့၊ နီကိုတင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်လက္ခဏာများ၊ တဏှာ။ နောက်ထပ်သေးငယ်သောရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (n = ၂၄ ဘာသာရပ်) မှ NAC သည်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်သုံးသူများအားဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်တက်ကြွအားကိုလျော့နည်းစေကြောင်း၊မီးခိုးရောင် et al။ , 2010) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောစွဲချက်များအတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခု (= = ၂၃ ဘာသာရပ်) သည် NAC (ထိရောက်သောပမာဏ ၁၄၇၇ မီလီဂရမ် / တစ်နေ့လျှင်ဆိုလိုသည်) သည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအတွက်ပြုပြင်ထားသော Yale Brown Obsessive Compulsive Scale အပေါ်ရမှတ်များလျှော့ချကြောင်းပြခဲ့သည် ((PG-YBOCS))ဂရန် et al။ , 2007), နှင့်သုံးလူနာအတွက်စိတ်ကြွရောဂါနှင့်ဆက်စပ် compulsive လက်သည်း-ကိုက်လျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြသBerk et al။ , 2009) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် NAC သည် trichotillomania ပါသောလူနာ ၅၀ ကို double-blind လေ့လာမှုတွင်ဆံပင်ဆွဲခြင်းကိုနှိမ်နင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ဂရန် et al။ , 2009).
အထက်ဖော်ပြပါလက်တွေ့လေ့လာမှုများအားလုံးသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်နမူနာအရွယ်အစားများကိုအသုံးပြုသော်လည်း၊ NAC ၏စွဲမြဲနေသည့် anti- စွဲစေသည့်ဂုဏ်သတ္တိများသည်ဤဆေးသည်အချိုမှုသာသော homeostasis ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသောအခြားဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည် (Knackstedt et al။ , 2010; Sari et al။ , 2009), အလားအလာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သော pharmacotherapeutic အထောက်အကူဖြစ်သက်သေပြလိမ့်မည်။
၂.၃ ။ D-cycloserine (DCS)
2.3.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
DCS (D-4-amino-3-isoxazolidone) သည်သဘာဝအမိုင်နိုအက်ဆစ် serine မှဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ရှိ NMDA receptors အားလုံးအတွက်ရှိနေသည့် NMDA receptor ၏ NR1 subunit ရှိ glycine-binding site တွင် Co-agonist အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ DCS သည် NMDA receptors ကိုသူ့ဟာသူသက် ၀ င်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုကြိုးပမ်းရန်အတွက် receptor နှင့်တွဲဖက်နေသော glutamate ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ DCS မှ glycine binding site ကိုသက် ၀ င်စေခြင်းသည် neurotoxicity မဖြစ်စေဘဲဤ receptors များမှတစ်ဆင့် calcium ၀ င်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် NMDA ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် (ရှိန် et al။ , 2001; မြင် ပုံ 1).
NMDA receptor function ကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် DCS သည် Pavlovian တွဲဖက်လေ့လာခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းသင်ယူခြင်းအပါအ ၀ င် Synaptic plasticity နှင့်သင်ယူမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ မြောက်မြားစွာလက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက် cue ထိတွေ့ကုထုံးစဉ်အတွင်းရောဂါလူနာ (အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် Davis က et al။ , 2006; Myers et al။ , 2011; Myers နှင့် Davis က, 2007) ။ စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ DCS သည်ကိုကင်းမှသွေးဆောင်ထားသည့်အခြေအနေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ပြန့်ပွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်ကိုပြသည်။ဗိုလ်တထောင် et al။ , 2006; Thanos et al။ , 2009), မျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိမှုလျော့နည်းစေသည် (Nic Dhonnchadha et al။ , 2010) နှင့်ကိုကာကိုလာရှာဖွေခြင်းကိုအခြေအနေတစ်ခုအရအမှီအခိုကင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။Torregrossa et al။ , 2010) ။ သို့သော် DCS ၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုအနည်းငယ်မျှသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Santa Ana နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များSanta Ana et al။ , 2009နီကိုတင်းကိုမှီခိုသောဆေးလိပ်သောက်သူ ၁၂ ဦး တွင် cue ထိတွေ့မှုကုထုံးကိုခံယူပြီးနောက် DCS (၅၀ မီလီဂရမ်) ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာ - အရေပြားစီးဆင်းမှု) တုံ့ပြန်မှုများကိုသိသိသာသာလျော့ပါးစေသည်ဟုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာကုသဘာသာရပ်များ (= = 12) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆက်စပ်တွေကို။ DCS ကုသမှုခံယူသူများသည်ယေဘုယျဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်းတစ်ပတ်အကြာတွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏလျော့ကျမှုကိုနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်များအရ DCS သည်စီးကရက်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်တွင် cue ထိတွေ့မှုကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သို့သော်အခြားမကြာသေးမီကလေ့လာမှု DCS ၏တူညီသောထိုးအမှန်တကယ် 50 မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကိုကင်းတပ်မက်၏ပုဂ္ဂလဒိreports္အစီရင်ခံစာများတိုးဆီသို့ ဦး တည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (စျေးနှုန်း et al။ , 2009) ။ ကုသမှု - ရှာဖွေလူနာ DCS အုပ်ချုပ်ရေး၏အချိန်ကိုက်သည်ဤသိသာစိတ်တိုးပွားတွေ့ရှိချက်များအတွက်ဆက်စပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်များအရမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ DCS ၏ထိုးသွင်းမှုများသည် basalateral amygdala သို့ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်ကြွယ်ဝသောကြွက်များတွင်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အမှတ်တရများပြန်လည်စုစည်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်အားဖြည့်ပေးသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။Lee က et al။ , 2009) ။ ရှင်းနေသည်မှာ DCS သည်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ၏မက်လုံးပေးမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေမည့်အစား DCS ကိုအမှန်တကယ်တိုးမြှင့်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် DCS သည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆေးစွဲမှုများအပေါ် DCS ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်လေ့လာမှုများကဲ့သို့ DCA သည်ကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်းတို့မှ လွဲ၍ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအား cue ထိတွေ့မှုကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၂.၄ ။ Gabapentin
2.4.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Gabapentin သည်ကြိုတင်နိမ့်ဗို့အား -gated Na ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်အာရုံခံဆဲလ်များသို့ယေဘုယျတားစီးမှုသက်ရောက်စေသည့် anticonvulsant ဆေးဖြစ်သည်။+ နှင့် Ca2+ လိုင်းများ (Dickenson နှင့် Ghandehari, 2007; မှတ်တိုင်, 2007; Rogawski နှင့် Loscher, 2004) ။ ရလဒ်အနေဖြင့် gabapentin မှဥပမာပြသည်မှာ glutamate အပါအဝင် neurotransmitter အမျိုးမျိုးထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ပုံ 1 (Coderre et al။ , 2007; Cunningham et al။ , 2004; မင်္ဂလာပါ et al။ , 2000; က Fink et al။ , 2000; Maneuf ပါ et al။ , 2004; Maneuf နှင့် McKnight, 2001; ချစ်သူ et al။ , 2000).
လေ့လာမှုများစွာအရ gabapentin သည်အရက်ဖြတ်ခြင်း၏လက္ခဏာများကိုလျော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ဉီးဆောင် et al။ , 1999; Bozikas et al။ , 2002; မာရီယာနီ et al။ , 2006; Martinez-Raga et al။ , 2004; Myrick et al။ , 1998; Rustembegovic et al။ , 2004; Voris et al။ , 2003မကြာခဏအလယ်အလတ်မှပြင်းထန် CNS hyperexcitability နှင့်တက်ခြင်းနှင့်အတူတင်ဆက်သော) ။ Gabapentin သည်အရက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအိပ်စက်ခြင်းပြdistနာများကိုလျှော့ချရာတွင် benzodiazepine lorazepam ထက်သာလွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Malcolm et al။ , 2007) ။ ယနေ့ထိတိုင် gabapentin ၏ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ တဏှာဖြစ်မှု (သို့) relapse ကိုလျော့နည်းစေသည့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများသည်ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများစွာအရ (gabapentin (တစ်နေ့လျှင် ၆၀၀ မှ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးပမာဏ) ရှိသောကြောင့်စွဲစွဲသူများအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းကိုမလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။Bisaga et al။ , 2006; Gonzalez et al။ , 2007အခြားလေ့လာမှုများအရ gabapentin သည်တက်ကြွသောကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်တဏှာကိုလျော့နည်းစေသည်။Berger et al။ , 2005; Myrick et al။ , 2001; ရာဘီ, 2000; Raby နှင့် Coomaraswamy, 2004), ဖြစ်ကောင်းကိုကင်း၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှု attenuating အားဖြင့် (Haney et al။ , 2005) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရ gabapentin (တစ်နေ့လျှင် ၆၀၀ မှ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်) သည်အရက်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်သုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။Furieri နှင့် Nakamura-Palacios, 2007; Mason ဆို et al။ , 2009; Myrick et al။ , 2009) နှင့်အရက်ကိုမှီခိုသောဘာသာရပ်များတွင်အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ခြင်း (Brower et al။ , 2008) ။ သို့သော်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည်အရက်စွဲအားအပေါ် gabapentin ပမာဏ၏အလားတူဆေးများကိုမတွေ့ရပါ။Bisaga နှင့်အီဗန်, 2006; Myrick et al။ , 2007) ။ ထို့အပြင် gabapentin မှမက်သာဖီတမင်းဆေးသုံးစွဲမှုကိုမလျှော့ချကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (ဟင်နရီ et al။ , 2006), ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အပေါ်ကန့်သတ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် (အဖြူ et al။ , 2005) နှင့် opiate- မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိive္ဆုတ်ခွာလက္ခဏာများ ameliorate ပါဘူး (Kheirabadi et al။ , 2008) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဤအချက်အလက်များကို gabapentin အရက်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာတွေကုသမှုများအတွက်ထိရောက်သောကြောင်း (အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်ကိုကင်းများအတွက်တဏှာကိုလျှော့ချဘို့အချို့ထိရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြု (လေ့လာမှုအားလုံးကဒီအယူအဆကိုထောက်ခံပေမယ့်), ဒီဆေးသည်မည်သည့်ထိရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်နိုင် စီးကရက်၊ မက်သာဖက်တမင်းဆေးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများလျော့ချခြင်း။ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, gabapentin အမူအကျင့်စွဲ၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးမထားပါဘူး။
၂.၅ ။ Lamotrigine
2.5.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
gabapentin နှင့်ဆင်တူသည် lagotrimine သည်သွေးကြောမွှားဖြစ်သည်။+ နှင့် Ca2+ လိုင်းများ (Dickenson နှင့် Ghandehari, 2007; မှတ်တိုင်, 2007; Rogawski နှင့် Loscher, 2004) အားဖြင့် glutamate အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော neurotransmitters များထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည် ပုံ 1; အာမက် et al။ , 2004; Cunningham နှင့်ဂျုံးစ်, 2000; Leach et al။ , 1986; Lees နှင့် Leach, 1993; Lingamaneni နှင့် Hemmings, 1999; Sitges et al။ , 2007; သီဟ et al။ , 1995; Waldmeier et al။ , 1995, 1996; ဝမ် et al။ , 2001) ။ Lamotrigine သည်ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်း Stevens-Johnson Syndrome ဟုလူသိများသောအရေပြားယားယံခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်မှုအန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းထိုးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၅ မီလီဂရမ် / တစ်နေ့လျှင်စတင်ပြီးအပတ်စဉ် 25-200 မီလီဂရမ်မီလီဂရမ် / တစ်နေ့လျှင်ဆေးထိုးရန်အလှည့်ကျနေသည်။
gabapentin ကဲ့သို့ပင် lamotrigine သည်အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၏လက္ခဏာများကိုတားဆီးပေးသည်။Krupitsky et al။ , 2007b) ။ လတ်တလောလက်တွေ့လေ့လာမှုများအရ lamotrigine သည်ကိုကင်းသုံးစွဲလိုစိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့တွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။Berger et al။ , 2005; ညိုသော et al။ , 2003, 2006; Margolin et al။ , 1998; Pavlovic၊ ၂၀၁၁ကကိုင်း၏ပုဂ္ဂလဒိeffects္အကျိုးသက်ရောက်မှုများမပြောင်းလဲဘဲထားခဲ့ပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း ()ဆောင်းရာသီ et al။ , 2000) ။ အလားတူ lamotrigine ၏အရက်သေစာအပေါ်တွန်းအားအပေါ်Rubio et al။ , 2006) နှင့်စော်ကားသောရှူရှိုက်မိပါ (Shen, 2006) အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက lamotrigine သည်ကိုကင်း၊ အရက်သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုရှိသောရှူရှိုက်မိသူများအားစွဲလမ်းမှုကိုကုသရာတွင်လက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ opiates၊ နီကိုတင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးများ (methamphetamine) ကဲ့သို့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုများကိုကုသရာတွင် lamotrigine ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောထိရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းများမရှိသေးပါ။
2.6 ။ Memantine
2.6.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Memantine သည် NMDA receptor တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိသောရန်သူဖြစ်သည် (ပုံ 1) နှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်သိမြင်မှုကျဆင်းမှု၏ကုသမှုများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ NMDA receptors များတွင် antagonist လုပ်ဆောင်မှုများအပြင် memantine သည် serotonin type3receptor ကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားသည်။3) အဖြစ်နီကိုတင်း acetylcholine receptors ။ phencyclidine, ketamine, dextromethorphan သို့မဟုတ်အရက်ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းများသည် NMDA receptor တွင် antagonist properties များရှိသော်လည်း memantine သည် NMDA receptor antagonists အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။Vosburg et al။ , 2005).
အရက်သမား detoxifying အတွက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချမှာထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းအပြင် (Krupitsky et al။ , 2007b) နှင့် opiate စွဲ (Bisaga et al။ , 2001), memantine (30-60 မီလီဂရမ် / တစ်ရက်အကွာအဝေးပုံမှန်ပုံမှန်ဆေးများ) ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရက်သောက် attenuating နှင့် / သို့မဟုတ်အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်အရက်အဘို့အတပ်မက်ခြင်း၌ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည် (Arias et al။ , 2007; Bisaga နှင့်အီဗန်, 2004; Krupitsky et al။ , 2007a) ။ အရက်ကိုတမ်းတမှုတိုးပွားလာမှုသည် memantine ၏အရက်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂလဒိeffects္ effects သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Bisaga နှင့်အီဗန်, 2004; Krupitsky et al။ , 2007a) ။ သို့သော်ပိုကြီးသောရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှုအရ memantine သည်အရက်သေစာမှီခိုနေသည့်လူနာများအပေါ်တွင်သောက်သုံးခြင်းအပြုအမူအားလျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။အီဗန် et al။ , 2007) ။ Memantine သည်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်အစီရင်ခံခဲ့သည် (မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al။ , 2009) နှင့်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူ (Comer နှင့် Sullivan က, 2007); သို့သော်အထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများမှာ, memantine ကို၏ပုဂ္ဂလဒိand္နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများတိုးပွားစေနိုင်သည် (Collins et al။ , 1998, 2007) ။ စုပေါင်း၍ ဤအချက်အလက်များအရ memantine သည်အရက်သေစာသို့မဟုတ်ဘိန်းစွဲမှီခိုသောလူနာများအားအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်ကုသမှုအတွက်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာတွဲဖက်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုအခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကုသရန်အလားအလာကောင်းကြောင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်သောလေယာဉ်မှူးစမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ memantine သည် PG-YBOCS ရမှတ်များလျော့နည်းသွားပြီးလောင်းကစားသမား ၂၉ ယောက်တွင်လောင်းကစားအချိန်ကိုလျော့နည်းသွားစေခဲ့သည်။ဂရန် et al။ , 2010bmemantine ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားအဖြစ်အပြုအမူစွဲ၏ကုသမှုအတွက်အလားအလာအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြု) ။ ။
2.7 ။ Modafinil
2.7.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Modafinil သည် CNS ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာဖြစ်ပြီးမူလကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသို့မဟုတ် shiftwork ကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းလွန်ကဲခြင်းများကိုကုသရာတွင်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်နှင့်နိုးထစေရန်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Modafinil ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity Disorder အတွက်ဆေးညွှန်းမပါသောကုသမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်း၏ neuropharmacological လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်သော်လည်း modafinil သည်အမ်ဖက်တမင်းကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးများကဲ့သို့ monoamine releaser အဖြစ်လုပ်ဆောင်ပုံမပေါ်ပါ။ ၎င်းအစား၊ modafinil သည်α-adrenoceptors များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ GABA လွှတ်ပေးခြင်းကိုဖိနှိပ်ခြင်း၊ dopamine Transporter အားအားနည်းစွာဟန့်တားခြင်း (သို့) hypothalamic orexin ပါဝင်သောအာရုံခံဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။Ballon နှင့် Feifel, 2006; Martinez-Raga et al။ , 2008) ။ အစီရင်ခံတင်ပြသောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများတွင်အခမဲ့အစွန်းရောက်များပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော cytotoxicity တို့ပါဝင်သည်။Gerrard နှင့် Malcolm, 2007) ။ လေ့လာမှုတော်တော်များများက၎င်းရဲ့ stimiulant သက်ရောက်မှုများအတွက် dopaminergic အခြေခံအကြံပြုသည် (Andersen က et al။ , 2010; Volkow et al။ , 2009; Wisor နှင့် Eriksson, 2005), modafinil dorsal striatum, hippocampus နှင့် diencephalon အပါအဝင်အများအပြား ဦး နှောက်ဒေသများရှိ glutamate ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်မြှင့်ပြသလျက်ရှိသည် ပုံ 1()Ferraro et al။ , 1997, 1998, 1999glutamate ပေါင်းစပ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ (Perez de la Mora et al။ , 1999) ။ Modafinil သည်အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာနည်းသည်Martinez-Raga et al။ , 2008), မြင့်မားသောဆေးများမှာအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာ၏အစီရင်ခံစာများ (ပေမယ့်)Andersen က et al။ , 2010) နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောအသုံးပြုမှုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည် (Ballon နှင့် Feifel, 2006) ။ ရလဒ်အနေဖြင့် modafinil သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဇယား (၄) ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ modafinil ဆေးခန်း၏ထိရောက်သောဆေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂၀၀၄ မှ ၄၀၀ မီလီဂရမ်အထိရှိသည်။
ဆေးမှတ်တမ်းများအရ modafinil သည်ကိုကင်းမှီဝဲမှုကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။Martinez-Raga et al။ , 2008) ။ Dackis နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လေ့လာမှုတွင် modafinil (တစ်နေ့လျှင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်) ကိုကင်းစွဲစွဲသူများအတွင်းသွေးကြောသွင်းရောဂါ၏ Euphorigenic သက်ရောက်မှုများအားနည်းချက်ရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။Dackis et al။ , 2003), နှင့်ဤတွေ့ရှိချက်အကြာတွင်လွတ်လပ်စွာပုံတူကူးခဲ့သည်Malcolm et al။ , 2006) ။ ကုသမှုရှာကြံနေသည့်ကိုကင်းအပေါ်မှီခိုသောပြင်ပလူနာများကိုမျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သည့်ရလဒ်များအရ modafinil (တစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မီလီဂရမ်) သည်နေ့စဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်ကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။Dackis et al။ , 2005) ။ မကြာသေးမီက Multi- စင်တာများလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအရ modafinil သည်ကိုကိုးမှီခိုနေရသောမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုမပါဘဲကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။အန်ဒါဆင် et al။ , 2009) ။ ဤအချက်အလက်များက modafinil သည်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသော်လည်း၊ အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့မှာ modafinil ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုကင်း၏ပလာစမာပြင်းအားမြင့်တက်မှုလျော့ကျလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (ဒိုနိုဗန် et al။ , 2005) ။ Modafinil သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားတက်ကြွစွာစိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲမှုလျော့ကျသွားခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ရှီးယား et al။ , 2009) နှင့်ထကြွလွယ်သောပြproblemနာလောင်းကစားသမားအတွက်လောင်းကစားအပြုအမူအတွက်လျှော့ချ (Zack နှင့် Poulos, 2009) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးစွဲသူများနှင့်ရောဂါကစားသမားများကိုကုသရာတွင် modafinil ၏အလားအလာကိုဖော်ပြသောရလဒ်ကောင်းများရှိသော်လည်းမကြာသေးမီကလေ့လာချက်အရ modafinil သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးလိပ်သောက်သူများထက်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Schnoll et al။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့် modafinil သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပုံမပေါ်ပါ။
အာရုံကြောဓာတုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည် extracellular glutamate ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးသော modafinil ကဲ့သို့သောဆေးတစ်မျိုးသည်ကိုကင်းစားသုံးမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ကြောင်း၊ တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာအရ glutamatergic neurotransmission ၏ပိတ်ဆို့မှုကိုဖော်ပြသည်။ အချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်မှုကိုနှိမ်နင်းစေသည့် glutamate receptor antagonists၊ postsynaptic mGluR ရန်သူ (သို့) glutamate ထုတ်လွှတ်မှုကိုနှိမ်နင်းသော presynaptic mGluR2 / 3) သည်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားပြန်လည်ထူထောင်စေသည် (ဓာတ်ငွေ့နှင့်သံလွင်, 2008; Kalivas et al။ , 2009; Knackstedt နှင့် Kalivas, 2009; သံလွင်, 2009; Tzschentke နှင့် Schmidt က, 2003) ။ ကိုကင်းငတ်မွတ်မှုကိုလျှော့ချရာတွင် modafinil ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအယူအဆတစ်ခုမှာကိုကင်းအားပြန်လည်ထုတ်ယူနေစဉ်အတွင်းနျူကလိယအက်စစ်တွင်တွေ့ရသော extracellular glutamate ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကိုကင်း (Cocaine) ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်းတွေ့ရှိရသော extracellular glutamate ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ NAC အတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုယန္တရား - ပုံ 1) ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
2.8 ။ Topiramate
2.8.1 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Topiramate, gabapentin နှင့် lamotrigine အပါအဝင်အခြား anticonvulsants ကဲ့သို့, presynaptic ဗို့အား -gated Na ၏တားစီးအပါအဝင်လုပ်ဆောင်ချက်အများအပြားယန္တရားများရှိသည်+ နှင့် Ca2+ channel များ (ဤနည်းဖြင့် glutamate အပါအဝင် neurotransmitter ထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီး) နှင့် type A GABA (GABA) ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေ။Areceptors (Dickenson နှင့် Ghandehari, 2007; မှတ်တိုင်, 2007; Rogawski နှင့် Loscher, 2004) ။ ထို့အပြင်၊ topiramate သည် GluR3 subunit ပါ ၀ င်သည့်α-amino-5-hydroxy-4-methyl-5-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors မှာ antagonist တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကပြသခဲ့သည်။ပုံ 1()Gryder နှင့် Rogawski, 2003; Kaminski et al။ , 2004) ။ ဒီအချိုမှုနွေးဓာတ်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ receptor အမျိုးအစားကိုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကထုတ်လုပ်သည့် neuroadaptive ပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါး Self- အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse ကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ညွှန်ပြထားပြီးကတည်းက AMPA အဲဒီ receptor function ကိုအပေါ်ဤလုပ်ရပ်များအထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်Bower et al။ , 2010; ဓာတ်ငွေ့နှင့်သံလွင်, 2008; Niehaus et al။ , 2009; ရှီနှင့် Gardner, 2008) ။ Topiramate ၏ပုံမှန်ထိရောက်သောဆေးများသည်တစ်နေ့လျှင် ၇၅ မှ ၃၅၀ မီလီဂရမ်မှသည်။
gabapentin နှင့် lamotrigine နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်ဆင်တူအရက်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာတွေ၏ attenuation အပြင် (Krupitsky et al။ , 2007b), topiramate လည်း benzodiazepine ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏သက်သာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်Michopoulos et al။ , 2006) ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ၊ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းတို့တွင် topiramate ၏ထိရောက်မှုကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုများစွာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။အန်ဒါဆင်နှင့်အိုလီဗာ, 2003; ဂျွန်ဆင် et al။ , 2004; Kenna et al။ , 2009; Komanduri၊ ၂၀၀၃; Ma et al။ , 2006; Miranda et al။ , 2008; Rubio et al။ , 2004) ။ Topiramate သောက်သုံးရေကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းသည် Impulsivity ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှုကိုတိုးတက်စေရန်စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Rubio et al။ , 2009) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ topiramate သည် abstinence ကိုကြာရှည်စေခြင်းနှင့်ဆက်လက်သောက်သုံးခြင်းနှင့် relapse ကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်“ ရွှေအဆင့်” အရက်သေစာဆန့်ကျင်သော naltrexone ထက်သာလွန်ကြောင်းညွှန်ပြချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။Baltieri et al။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့် topiramate သည်အရက်ယမကာများကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်အလားအလာရှိသောဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ topiramate သည်ကိုကင်းမှီဝဲသူတစ် ဦး ချင်းအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်တွန်းအားကိုလျှော့ချရန်ပြသခဲ့သည်။Kampman et al။ , 2004; ဦးခေါင်း et al။ , 2008), သေးနှစ်ခုလက်တွေ့လေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားကန့်သတ်နေကြသည် (မင်းသမီး et al။ , 2008) ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ topiramate သည် methylenedioxymethamphetaine (MDMA,“ Ecstasy”) ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။Akhondzadeh နှင့် Hampa၊) ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအနေဖြင့်အချို့သောလေ့လာမှုများကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြုံငုံဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူကိုလျှော့ချရာတွင် topiramate ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။Arbaizar et al။ , 2008; ဂျွန်ဆင် et al။ , 2005; Khazaal et al။ , 2006) ။ Topiramate ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုကြာရှည်စွာလုပ်ခြင်းသည်ကျား / မကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။Anthenelli et al။ , 2008) ။ သို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ lamotrigine နှင့်ဆင်တူသည် topiramate သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၏ပုဂ္ဂလဒိeffects္aအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သည့်စီးကရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် cue- သွေးဆောင်လိုသောဆန္ဒအပေါ်မသက်ရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ရိဒ် et al။ , 2007), ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအတွက်အကူအညီအဖြစ် topiramate ၏အလားအလာအသုံးပြုမှုကိုမေးခွန်း။ အလားတူစွာ၊ topiramate သည်မက်သာဖီတမင်းမှဖြစ်ပေါ်သောပုဂ္ဂလိကအပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်ပြသခဲ့သည်။ဂျွန်ဆင် et al။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့် topiramate သည်အရက်နှင့်ကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်းဆေးစွဲမှုကိုကုသရာတွင်ကတိက ၀ တ်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်ကုထုံးတစ်ခုအနေနှင့်၎င်း၏အလားအလာကိုဆန်းစစ်ရန်ပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအနည်းငယ်သောလေ့လာမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာများကို topiramate သည်ဤရောဂါများကိုကုသရာတွင်အလားအလာရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် topiramate ၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသနာများသောလောင်းကစားခြင်းမှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလျှော့ချရာတွင်တွေ့ရှိရသည်။Dannon et al။ , 2007) နှင့်မသင်မနေရအစားအစာနှင့်လိင်အပြုအမူကိုလျှော့ချFong သည် et al။ , 2005; Khazaal နှင့် Zullino, 2006; Tata နှင့် Kockler, 2006) ။ ရှင်းနေသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်ဤနည်းလမ်းကိုထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
3 ။ အကျဉ်းချုပ်နှင့်နိဂုံး
ဤတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် glutamatergic လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား (acamprosate, NAC, DCS, gabapentin, lamotrigine, memantine, modafinil နှင့် topiramate) ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆေးဝါးရှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ NAC, modafinil နှင့် topiramate သည်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအများဆုံးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်စွဲများကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်အကြီးမားဆုံးသောအလားအလာရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သောမည်သည့်ဆေးဝါးများသည်မဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအားလုံးအတွက်စိတ်ပူပန်စရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အထူးသဖြင့်ကိုကာကိုလာနှင့်အရက်) ကိုစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးသို့မဟုတ်သိမြင်မှု - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးကိုထိရောက်သောဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာအကူအညီများဖြစ်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း (အထူးသဖြင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း) ။ အနည်းဆုံးဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြင့်ဆေးတစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားတစ်မျိုးအားပိုမိုကောင်းမွန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်သောလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်စံနှုန်းအတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ရလဒ်အတိုင်းအတာကိုအခြေခံသည့်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုက်သောယနေ့ခေတ်လွန်မျိုးရိုးဗီဇခေတ်သည်သုတေသီများနှင့်ဆရာဝန်များအားဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောမျိုးရိုးဗီဇအားအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ကုသမှုမစတင်မီဤဆေးတစ်မျိုးချင်းစီအတွက်အလားအလာရှိသောတုံ့ပြန်သူများနှင့်မတုံ့ပြန်သူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်းများ။ အချို့သောဒြပ်ပေါင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သောအချက်အလက်အကန့်အသတ်ဖြစ်သော DCS နှင့် lamotrigine သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော multi-center လေ့လာမှုများကိုအာမခံသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ စွဲလမ်းမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်အမူအကျင့်နှင့်ပြန်လည်ကျင့်သုံးမှုစသည့်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များကိုဖျန်ဖြေပေးသည့်တိကျသော glutamatergic ယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပိုမိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်သောဆေးဝါးဗေဒချဉ်းကပ်မှုဆီသို့ ဦး တည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ စွဲလမ်းမှု၏တိကျသောအဆင့်များ၌ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။
စာရေးသူများသည်အနုပညာလက်ရာမျိုးဆက်အတွက်အကူအညီအတွက် Katie Ris-Vicari ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ DA024355, DA025606 နှင့် AA013852 (MFO) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Ahmad S, Fowler LJ, Whitton PS ။ ကြွက်များ၏ hippocampus အတွက် Basal နှင့် stimulated extracellular အမိုင်နိုအက်ဆစ်အပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် lamotrigine ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 2004;1029: 41-47 ။ [PubMed]
Akhondzadeh S, Hampa အေဒီ။ Topiramate သည် ecstasy စားသုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Fundam Clin Pharmacol ။ 2005;19: 601-602 ။ [PubMed]
အယ်လ်ကာတာမီ M, Bouchenafa အို, Lampleton ဂျေ acamprosate ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုယန္တရား။ အပိုင်း ၂ ။ အီသနောမှီခိုအားထားမှုသည်ကြွက် ဦး နှောက် cortex မှအမြှေးပါးများတွင်စည်းနှောင်ထားသော NMDA receptor အပေါ် acamprosate ၏သက်ရောက်မှုများကိုပြုပြင်သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22: 810-814 ။ [PubMed]
Amen SL, Piacentine LB, Ahmad ME, Li SJ, Mantsch JR, Risinger RC, et al ။ ထပ်ခါတလဲလဲ N-acetylcysteine ​​ကြွက်များတွင်ရှာဖွေကိုကင်းနှင့်ကင်း - မှီခိုလူသားမြားတှငျအတွက်တဏှာလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2011;36: 871-878 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Andersen က ML, Kessler အီး, Murnane KS, McClung JC, Tufik S က, Howell ll ။ မျောက်တွေကိုအတွက် modafinil ၏ Dopamine Transporter-related ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2010;210: 439-448 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Anderson က AL, Reid MS, Li SH, Holmes T, Shemanski L, Slee A, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုမှု၏ကုသမှုများအတွက် Modafinil ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2009;104: 133-139 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Anderson က N ကို, မှာ Oliver MN ။ အရက်သောက်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သောခံတွင်း topiramate ။ J ကို Fam Pract ။ 2003;52: 682-683 ။ 7. [PubMed]
Anthenelli RM, Blom TJ, McElroy SL, Keck PE ။ , Jr ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အလားအလာရှိသည့် topiramate ၏ကျား - မဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ စွဲလမ်း။ 2008;103: 687-694 ။ [PubMed]
Anton RF, O'Malley SS, Ciraulo DA, Cisler RA, Couper D, Donovan DM ။ ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးနှင့်ကုထုံးနှင့်အရက်မှီခိုမှုအတွက်အမူအကျင့်ကြားဝင် - ပေါင်းစပ်လေ့လာမှု: တစ်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2006;295: 2003-2017 ။ [PubMed]
Aririzar B, Gomez-Acebo I, Llorca J. topiramate နှင့် aripiprazole နှင့်ကုသပြီးနောက်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုကျဆင်းခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ J ကို Med ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုယ်စားလှယ်။ 2008;2: 198 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Arias AJ, Feinn R၊ Covault J, Kranzler HR ။ အရက်သေစာမှီခိုမှုအတွက် Memantine: open-label ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စွဲစွဲလမ်းမှုကင်းဝေးသည်။ 2007;6: 77-83 ။
American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4th Edition ကို။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း၊ 2002 စာသားတည်းဖြတ်မူ။ 4th, စာသားတည်းဖြတ်မူ ed ။
Baker DA, McFarland K သည်, et al ရေကန် RW, Shen H ကို, တန် XC, Toda S က။ cystine-အချိုမှုလဲလှယ်အတွက် Neuroadaptations ကင်း relapse အခြေခံ။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 743-749 ။ [PubMed]
Baker DA၊ Xi ZX၊ Shen H၊ Swanson CJ, Kalivas PW ။ in vivo nonsynaptic glutamate ၏မူလနှင့်အာရုံခံ function ကို။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 9134-9141 ။ [PubMed]
Ballon JS, Feifel D. modafinil ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလက်တွေ့အသုံးပြုမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;67: 554-566 ။ [PubMed]
Baltieri DA, Daro FR, Ribeiro PL, de Andrade AG ။ topiramate နှင့် naltrexone တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စွဲလမ်း။ 2008;103: 2035-2044 ။ [PubMed]
Berger SP, Winhusen TM, Somoza EC, Harrer JM, Mezinskis JP, Leiderman DB, et al ။ ကိုကိုးမှီခိုမှု၏ reserpine, gabapentin နှင့် lamotrigine pharmacotherapy ၏စမ်းသပ်မှုအကဲဖြတ်တစ် ဦး ကဆေးစိစစ်။ စွဲလမ်း။ 2005;100 ပျော့ပျောင်း 1: 58-67 ။ [PubMed]
Berk M၊ Jeavons S, Dean OM, Dodd S, Moss K, Gama CS, et al ။ လက်သည်းကိုက်ခြင်း လက်သည်းကိုက်ခြင်းအပေါ် N-acetyl cysteine ​​၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ CNS Spectr ။ 2009;14: 357-360 ။ [PubMed]
Berton F, Francesconi WG, Madamba SG, Zieglgänsberger W, Siggins GR ။ Acamprosate က N-methyl-D-apartate အဲဒီ receptor-mediated neurotransmission ကိုတိုးစေတယ်။ ဒါပေမယ့် GABA ကိုတားဆီးပေးတယ်။B နျူကလိယအတွက် receptors အာရုံခံ accumbens ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22: 183-191 ။ [PubMed]
BK MK, လောရင့် AJ ။ Group I သည် metabotropic glutamate receptors: မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပလပ်စတစ်ပါဝင်ခြင်း။ Curr Mol Pharmacol ။ 2009;2: 83-94 ။ [PubMed]
Bisaga A, Aharonovich E, Garawi F, Levin FR, Rubin E, Raby WN, et al ။ ကိုကိုးမှီခိုမှုအတွက် gabapentin ကိုကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ဆေးမှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;81: 267-274 ။ [PubMed]
Bisaga A, Comer SD, Ward AS, Popik P, Kleber HD, Fischman MW ။ NMDA ၏ရန်သူသေနတ်ကိုင်သည်လူသားများတွင် opioid ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုဟူသောအသုံးအနှုံးကိုလျော့ပါးစေသည်။ Psychopharmacology ။ 2001;157: 1-10 ။ [PubMed]
Bisaga A, အီဗန် SM ။ အလယ်အလတ်သောက်သူများအနေဖြင့်အရက်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး memantine ၏ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology ။ 2004;172: 16-24 ။ [PubMed]
Bisaga A, အီဗန် SM ။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများတွင်အရက်နှင့် တွဲဖက်၍ gabapentin ၏ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;83: 25-32 ။ [PubMed]
Bonnet U, Banger M, Leweke FM၊ Maschke M, Kowalski T, Gastpar M. gabapentin နှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါကုသမှု။ Pharmacopsychiatry ။ 1999;32: 107-109 ။ [PubMed]
Botreau F၊ Paolone G, Stewart J. d-Cycloserine သည်ကိုကင်းမှပြုလုပ်သောအေးစက်သည့်နေရာကို ဦး စားပေးမှုမျိုးသုဉ်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006;172: 173-178 ။ [PubMed]
psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင် Bowers က MS, Chen က BT, Bonci အေ AMPA အဲဒီ receptor synaptic plasticity: အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ကုထုံးအနာဂတ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010;67: 11-24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bowers MS, Chen BT, Chou JK, Osborne MPH, Gass JT, RE ကိုကြည့်ပါ။ Acamprosate သည်ကိုကင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားကိုကင်းနှင့် cue- သွေးဆောင်မှုပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ Psychopharmacology ။ 2007;195: 397-406 ။ [PubMed]
Bozikas V၊ Petrikis P၊ Gamvrula K၊ Savvidou ၁၊ Karavatos A. gabapentin နှင့်အရက်သောက်ခြင်းကုသမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;26: 197-199 ။ [PubMed]
Brower KJ၊ Myra Kim H၊ Strobbe S၊ Karam-Hage MA, Consens F, Zucker RA အရက်သေစာမှီခိုခြင်းနှင့် comorbid အိပ်မပျော်ကုသရန် gabapentin နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုစမ်းသပ်ပြီးကျပန်းမျက်မမြင်နှစ် ဦး ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 1429-1438 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်ကိုကင်းမှီခိုနေသည့်လူနာများတွင် Brown ES, Nejtek VA၊ Perantie DC၊ Orsulak PJ, Bobadilla L. Lamotrigine ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;64: 197-201 ။ [PubMed]
Brown ES, Perantie DC၊ Dhanani N, Beard L, Orsulak P, Rush AJ စိတ်ကြွရောဂါနှင့် comorbid ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် Lamotrigine: ပုံတူပွားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းလေ့လာမှု။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2006;93: 219-222 ။ [PubMed]
Cartwright WS ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်: ဘဏ္financialာရေး, နာမကျန်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 2008;34: 224-233 ။ [PubMed]
Coderre TJ၊ Kumar N၊ Lefebvre CD, Yu JS ။ neuropathic နာကျင်မှုပုံစံအတွက်အချိုမှုထုတ်လွှတ်မှုတားစီးမှုနှင့် gabapentin, lamotrigine နှင့် riluzole တို့၏ allodynic ဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ J ကို Neurochem ။ 2007;100: 1289-1299 ။ [PubMed]
Collins က ED, Vosberg SK, Ward AS, Haney M, Foltin RW ။ လူသားများအတွက်ကိုကင်း၏နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအပေါ်မြင့်မားသောထိုးထားသည့် memantine ဖြင့်ကြိုတင်ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007;15: 228-237 ။ [PubMed]
Collins ကို ED, Ward AS, McDowell DM, Foltin RW, Fischman MW ။ memantine ၏သက်ရောက်မှုများလူသားများအတွက်ကိုကင်း၏ထိရောက်သော, အားဖြည့်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1998;9: 587-598 ။ [PubMed]
Comer SD က, Sullivan က MA ။ Memantine သည်လူ့သုတေသနလုပ်အားပေးများ၌ဘိန်းဖြူသွေးဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတုံ့ပြန်မှုများအနည်းငယ်ကျဆင်းစေသည်။ Psychopharmacology ။ 2007;193: 235-245 ။ [PubMed]
Cunningham MO ကို, ဂျုံးစ်သည် RS ။ အဆိုပါ anticonvulsant, lamotrigine အလိုအလျောက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရေးလျော့နည်းပေမယ့်စသည်တို့အတွက်ကြွက် entorhinal cortex အတွက်အလိုအလျောက် GABA လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ Neuropharmacology ။ 2000;39: 2139-2146 ။ [PubMed]
Cunningham MO ကို, Woodhall GL, Thompson က SE, Dooley DJ သမားဂျုံးစ် RS ။ Gabapentin နှင့် pregabalin တို့၏နှစ်မျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြွက် entorhinal synapses တွင်စသည်တို့အတွင်းရှိ glutamate ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004;20: 1566-1576 ။ [PubMed]
Dackis, CA, Kampman KM, Lynch KG, Pettinati HM, O'Brien CP ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် modafinil ကို double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 205-211 ။ [PubMed]
et al Dackis, CA, Lynch KG, Yu E, Samaha FF, Kampman KM, Cornish JW ။ Modafinil နှင့် cocaine - မျက်စိကန်းသော၊ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2003;70: 29-37 ။ [PubMed]
Dennon PN, Lowengrub K၊ Musin E, Gonopolsky Y, Kotler M. ၁၂ လကြာရောဂါဗေဒကစားသမားများအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုလေ့လာခြင်း - အဓိကရလဒ်ရလဒ်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2007;27: 620-624 ။ [PubMed]
မျိုးသုဉ်းမှုအတွက် Davis M၊ Ressler K၊ Rothbaum BO, D-cycloserine ၏ရစ်ချတ်ဆန် R. အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - preclinical မှလက်တွေ့အလုပ်သို့ဘာသာပြန်ခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;60: 369-375 ။ [PubMed]
De Witte P, Littleton J, Parot P, Koob G. Neuroprotective နှင့် acamprosate ၏ abstinence- မြှင့်တင်သောသက်ရောက်မှုများ - လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားကိုဖော်ထုတ်သည်။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2005;19: 517-537 ။ [PubMed]
ဒစ်ကင်းဆန် AH၊ Ghandehari ဂျေ။ Handb Exp Pharmacol ။ 2007: 145-177 ။ [PubMed]
Donovan DM, Anton RF, Miller WR, Longabaugh R, Hosking JD, Youngblood M. ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးကုထုံးများနှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှုအတွက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ (COMBINE လေ့လာမှု) - ကုသမှုအလွန်အပြီးသောက်သုံးရခြင်း၏ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008;69: 5-13 ။ [PubMed]
Donovan JL, DeVane CL, Malcolm RJ, Mojsiak J, Chiang CN, Elkashef A, et al ။ Modafinil သည်ကိုကင်းမှီဝဲသောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများတွင်သွေးကြောသွင်းသောကိုကင်း၏ pharmacokinetics ကိုလွှမ်းမိုးသည်။ Clin Pharmacokinet ။ 2005;44: 753-765 ။ [PubMed]
Dooley DJ၊ Mieske CA၊ Borosky SA ။ K သည်၏တားစီး+gabapentin မှကြွက် neocortical နှင့် hippocampal ချပ်များမှ glutamate ထုတ်လွှတ်မှု။ neuroscience လက်တ။ 2000;280: 107-110 ။ [PubMed]
Evans SM, Levin FR, Brooks DJ, Garawi F. အရက်သေစာမှီခိုမှုအတွက် memantine ကိုနှစ် ဦး မျက်စိကန်းသောကုသမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 775-782 ။ [PubMed]
Ferraro L, Antonelli T, O'Connor WT, Tanganelli S, Rambert F, Fuxe K. မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဝါး modafinil သည် thalamic andရိယာများနှင့်ဟီပိုocampusတွင်အချိုမှုန့်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ NeuroReport ။ 1997;8: 2883-2887 ။ [PubMed]
Ferraro L, Antonelli T, O'Connor WT, Tanganelli S, Rambert FA, Fuxe K. Modafinil ၏ Striatal, pallidal နှင့် nigral GABA နှင့်သတိကြွက်တွင်အချိုမှုထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု - striato-pallidal GABA ထုတ်လွှင့်မှုကို ဦး စားပေးတားဆီးမှုအတွက်သက်သေသာဓက ။ neuroscience လက်တ။ 1998;253: 135-138 ။ [PubMed]
Ferraro L, Antonelli T, Tanganelli S, O'Connor WT, Perez de la Mora M, Mendez-Franco J, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါး modafinil ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည် medial preoptic andရိယာနှင့်သတိကြွက်၏နောက်ဘက် hypothalamus တို့တွင် extracellular glutamate ပမာဏတိုးပွားစေသည်။ ဒေသခံ GABA မှကာကွယ်ခြင်းA အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20: 346-356 ။ [PubMed]
Fink K, Meder W, Dooley DJ သမား, အာရုံခံ Ca ၏ Gothert အမ်တားစီး2+ gabapentin အားဖြင့်ရောက်လာနှင့်ကြွက် neocortical ချပ်ကနေ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်၏နောက်ဆက်တွဲလျှော့ချရေး။ br J ကို Pharmacol ။ 2000;130: 900-906 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fong TW, De La Garza R, 2nd, Newton TF ။ nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသမှုအတွက် topiramate ၏ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2005;25: 512-514 ။ [PubMed]
Furieri အက်ဖ်အေ, Nakamura-Palacios EM ။ Gabapentin သည်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်စွဲခြင်းတို့ကိုလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;68: 1691-1700 ။ [PubMed]
Gass JT, သံလွင် MF ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်း၏ glutamatergic အလွှာ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008;75: 218-265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gerrard P၊ Malcolm R. ၏ယန္တရားများ: လက်ရှိသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ dis ဆကျဆံပါ။ 2007;3: 349-364 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilson လေး, Kreis PG ။ ဆေးညွှန်း opioid analgesics ဆေး၏ nonmedical အသုံးပြုမှု၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ နာကျင်မှု Med ။ 2009;10 ပျော့ပျောင်း 2: S89-S100 ။ [PubMed]
Gonzalez, G, Desai R, Sofuoglu M, Poling J, Oliveto A, Gonsai K ။ ကိုကိုးမှီခို methadone- ကုသလူနာအကြားကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချဘို့ gabapentin နှင့် tiagabine နှိုင်းယှဉ်၏လက်တွေ့ထိရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007;87: 1-9 ။ [PubMed]
Grant JE၊ Chamberlain SR၊ Odlaug BL၊ Potenza MN၊ Kim SW ။ Memantine ကရှေ့ပြေးလေ့လာချက်တစ်ခုအရလောင်းကစားခြင်းတွင်လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်သိမြင်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကိုလျှော့ချရန်ကတိပေးသည်။ Psychopharmacology ။ 2010b;212: 603-612 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grant JE ကင်မ် SW, Odlaug BL ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် N-acetyl cysteine ​​တစ် glutamate-modulating အေးဂျင့်: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62: 652-657 ။ [PubMed]
Grant JE, Odlaug BL, ကင်မ် SW ။ trichotillomania ကိုကုသရာတွင် glutamate modulator ကို N-acetylcysteine ​​- မျက်စိကန်းသော၊ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;66: 756-763 ။ [PubMed]
je, Potenza MN, Weinstein တစ်ဦးက, Gorelick DA ပေးသနား။ အမူအကျင့်စှဲဖို့နိဒါန်း။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2010a;36: 233-241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grey KM, Watson NL, Carpenter MJ, Larowe SD ။ လူငယ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင် N-acetylcysteine ​​(NAC): open-label ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2010;19: 187-189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gryder DS, Rogawski MA ။ ကြွက် basolateral amygdala အာရုံခံအတွက် topiramate အားဖြင့် GluR5 kainate-receptor-mediated synaptic ရေစီးကြောင်း၏ရွေးချယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 7069-7074 ။ [PubMed]
Haney M၊ Hart C, Collins ED, Foltin RW ။ လူသားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်သောကိုကင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု - gabapentin ၏သက်ရောက်မှုများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005;80: 53-61 ။ [PubMed]
Harris က BR, Prendergast MA, Gibson DA, Rogers DT, Blanchard JA, Holley RC ။ Acamprosate သည် transrot-ACPD အပေါ် neurotoxic သက်ရောက်မှုများ၏စည်းနှောင်ခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီး metabotropic glutamate receptors တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုအကြံပြုသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2002;26: 1779-1793 ။ [PubMed]
Heinzerling KG, Shoptaw S, Peck JA, Yang X, Liu J, Roll J, et al ။ စိတ်ကြွဆေး, မက်သာဖက်ဖက်တမင်းမှီခို၏ကုသမှုများအတွက် baclofen နှင့် gabapentin ၏စမ်းသပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;85: 177-184 ။ [PubMed]
Jackson A၊ Nesic J, Groombridge C, Clowry O, Rusted J, Duka T. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏သိမြင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင် glutamatergic ယန္တရားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34: 257-265 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် BA, Ait-Daoud N, Akhtar FZ, Javors MA အရက်ကိုမှီခိုသောဆေးလိပ်သောက်သူများအကြားဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပါးစပ် topiramate အသုံးပြုခြင်း - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ Arch International Med ။ 2005;165: 1600-1605 ။ [PubMed]
Johnson BA၊ Ait-Daoud N၊ Akhtar FZ, Ma JZ ။ ခံတွင်း topiramate သောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရက် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်: တစ်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;61: 905-912 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် BA, Roache JD, Ait-Daoud N, Wells LT, Wallace CL, Dawes MA, et al ။ မက်သာဖီတမင်း - သွေးဆောင်သောပုဂ္ဂလိကစိတ်ဓာတ်အပေါ်စူးရှသော topiramate ထိုးခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2007;10: 85-98 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Lalumiere RT ကို, Knackstedt L ကို, စွဲလမ်းအတွက် Shen အိပ်ချ်အချိုမှုဂီယာ။ Neuropharmacology ။ 2009;56 ပျော့ပျောင်း: 169-173 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kaminski RM, Banerjee M, Rogawski MA ။ Topiramate သည် GluR5 kainate အဲဒီ receptor agonist ATPA မှဖမ်းဆီးရမိသောဖမ်းဆီးမှုများကိုရွေးချယ်ကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropharmacology ။ 2004;46: 1097-1104 ။ [PubMed]
Kampman KM, Dackis C, Pettinati HM, Lynch KG, Sparkman T, O'Brien CP ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် acamprosate ၏နှစ် ဦး မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled စမ်းသပ်မှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2011;36: 217-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG, Dackis C, Sparkman T, Weigley C, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် topiramate ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2004;75: 233-240 ။ [PubMed]
Kampman KM, Pettinati HM, Lynch KG, Xie H, Dackis C, Oslin DW, et al ။ အတွင်း - detoxification acamprosate စတင်ခြင်းနှင့်အရက်မှီခို၏ကုသမှုအတွက် Post-detoxification နှိုင်းယှဉ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2009;34: 581-586 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kau KS၊ Madayag A၊ Mantch JR၊ Grier MD၊ Abdulhameed O၊ Baker DA ။ နျူကလိယ၌သံမဏိ cystine-glutamate antiporter လုပ်ဆောင်ချက်သည်ကိုကင်း - သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ neuroscience ။ 2008;155: 530-537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kenna GA, Lomastro TL, Schiesl A, Leggio L, Swift RM ။ topiramate ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အရက်မှီခိုမှုအတွက်ကုသရန်အတွက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2009;2: 135-142 ။ [PubMed]
ကနေဒီ WK၊ Leloux M, Kutscher EC, PL PL, Morstad AE, Carnahan RM ။ Acamprosate ။ ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက် Drug Metab Toxicol ။ 2010;6: 363-380 ။ [PubMed]
Khazaal Y၊ Cornuz J၊ Bilancioni R၊ Zullino DF ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအဘို့အ Topiramate ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience ။ 2006;60: 384-388 ။ [PubMed]
Khazaal Y, Zullino DF ။ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှုတွင် Topiramate - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;6: 22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kheirabadi GR, Ranjkesh M, Maracy MR, ဘိန်းမှီခိုနေသည့်လူနာများအနေဖြင့်ဘိန်းမှထွက်သောရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် add-on gabapentin ၏ Salehi M. Effect ။ စွဲလမ်း။ 2008;103: 1495-1499 ။ [PubMed]
Kiefer F, Mann K. Acamprosate: ဘယ်လို၊ ဘယ်နေရာနှင့်မည်သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်သနည်း။ လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား, ကုသမှုပစ်မှတ်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းကုထုံး။ Curr Pharm Des ။ 2010;16: 2098-2102 ။ [PubMed]
Knackstedt LA က, Kalivas PW ။ အချိုမှုနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်း။ Curr Opin Pharmacol ။ 2009;9: 59-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Knackstedt LA, Larowe S, Mardikian P, Malcolm R, Upadhyaya H, Hedden S, et al ။ ကြွက်နှင့်လူသားများတွင်နီကိုတင်းမှီခိုမှုတွင် cystine-glutamate ဖလှယ်မှု၏အခန်းကဏ္။ သည် Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;65: 841-845 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Knackstedt LA, Melendez RI, Kalivas PW ။ Ceftriaxone သည်အချိုမှုန့် homeostasis ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးကိုကင်းကိုရှာဖွေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 81-84 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Komanduri R. Topiramate အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအရက်တပ်မက်မှုနှစ်ခု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;64: 612 ။ [PubMed]
Koob GF, Kenneth Lloyd, G, Mason BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ဆေးဝါးကုထုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခု Rosetta Stone ချဉ်းကပ်မှု။ နတ်ဗြာမူးယစ်ဆေး Discover ။ 2009;8: 500-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kranzler HR, အရက် - မှီခိုလူနာအတွက် Gage အေ Acamprosate ထိရောက်မှု: သုံးအရေးပါသောစမ်းသပ်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2008;17: 70-76 ။ [PubMed]
Krupitsky EM, Neznanova O, Masalov D, Burakov AM, Didenko T, Romanova T, et al ။ memantine ၏အသက် - လူနာပြန်လည်ထူထောင်အတွက် cue- သွေးဆောင်အရက်တပ်မက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007a;164: 519-523 ။ [PubMed]
Krupitsky EM, Rudenko AA, Burakov AM, Slavina TY, Grinenko AA, Pittman B, et al ။ အီသနော detoxification များအတွက် antiglutamatergic မဟာဗျူဟာ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် diazepam နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007b;31: 604-611 ။ [PubMed]
Laaksonen E, Koski-Jannes A၊ Salaspuro M, Ahtenen H, Alho အိပ်ချ်။ အရက်သေစာမှီခိုမှုကိုကုသရာတွင်ကျပန်း၊ ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သော၊ open-label၊ disulfiram၊ အရက်အရက်။ 2008;43: 53-61 ။ [PubMed]
မှတ်တိုင် CJ ။ အဆိုပါ synapse အတွက် antiepileptic မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ပစ်မှတ်။ Med သိပ္ပံ monite ။ 2007;13: RA1-RA7 ။ [PubMed]
et al LaRowe SD က, Mardikian P ကို, Malcolm R ကို, Myrick H ကို, Kalivas PW, McFarland K သည်။ ကိုကိုး - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် N-acetylcysteine ​​၏လုံခြုံမှုနှင့်သည်းခံစိတ်။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2006;15: 105-110 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
LaRowe SD, Myrick H, Hedden S, Mardikian P, Saladin M, McRae A, et al ။ ကိုကင်းအလိုဆန္ဒကို N-acetylcysteine ​​မှလျှော့ချသလား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164: 1115-1117 ။ [PubMed]
Leach MJ, Marden CM, Miller AA ဖြစ်သည်။ lamotrigine, အလားအလာ antiepileptic မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်ဆေးဝါးလေ့လာမှုများ: II ကို။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအပေါ်အာရုံကြောလေ့လာမှုများ။ Epilepsia ။ 1986;27: 490-497 ။ [PubMed]
Lee JL၊ Gardner RJ, Butler VJ, Everitt BJ ။ D-cycloserine သည်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်းကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2009;16: 82-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lees, G, Leach MJ ။ ကြွက် cortex ထံမှမူလတန်းအာရုံကြောယဉ်ကျေးမှုကိုအသုံးပြု။ ဝတ္ထု anticonvulsant lamotrigine (Lamictal) ၏လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားအပေါ်လေ့လာမှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1993;612: 190-199 ။ [PubMed]
Lejoyeux M, Lehert P. အရက်သုံးစွဲမှုမမှန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း - acamprosate ထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှုများမှလူနာတစ် ဦး ချင်း၏အချက်အလက်များ meta-analysis မှရလဒ်များ။ အရက်အရက်။ 2011;46: 61-67 ။ [PubMed]
Lhuintre JP, Daoust M, Moore ND, Chretien P, Saligaut C, Tran G ။ နို့ဘူးအရက်ကိုပြန်လည်သောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကယ်လ်ဆီယမ်အက်စီအက်စီ homomaurine (GABA agonist) စွမ်းရည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 1985;1(8436): 1014-1016 ။ [PubMed]
Lingamaneni R, Hemmings HC ။ , Jr ကြွက် cortical synaptosomes မှ veratridine- နှင့် KCl- evoked glutamate လွှတ်ပေးအပေါ် anticonvulsants ၏ Jr အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience လက်တ။ 1999;276: 127-130 ။ [PubMed]
LoCastro JS, Youngblood M၊ Cisler RA, Mattson ME, Zweben A, Anton RF, et al ။ ဒုတိယအဆင့်မဟုတ်သောရလဒ်များနှင့်ဘဝအရည်အသွေးအပေါ်အရက်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - COMBINE လေ့လာမှု။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2009;70: 186-196 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ma JZ၊ Ait-Daoud N၊ Johnson BA ။ Topiramate သည်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ စွဲလမ်း။ 2006;101: 1561-1568 ။ [PubMed]
Madamba စင်ကာပူ၊ Schweitzer P၊ Zieglgänsberger W၊ Siggins GR ။ Acamprosate (ကယ်လစီယမ် acetylhomotaurinate) သည်နို့မှုန့်အတွင်းရှိကြွက်ဟစ်ပိုတိုampလ် CA1 အာရုံခံရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ neurotransmission ၏ N-methyl-D-aspartate အစိတ်အပိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996;20: 651-658 ။ [PubMed]
Madayag A, Lobner: D, Kau KS, Mantsch JR, Abdulhameed O, Hearing M, et al ။ ထပ်ခါတလဲလဲ N-acetylcysteine ​​အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း၏ပလပ်စတစ် - မှီခိုသက်ရောက်မှုပြောင်းလဲ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 13968-13976 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Malcolm R ကို, Myrick LH, Veatch LM, Boyle အီး, Randall PK ။ Lorazepam နှင့် gabapentin တို့၏နှိုင်းယှဉ်ထားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်နှစ်ချက်မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ထားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်။ J ကို Clin အိပ်စက်ခြင်း Med ။ 2007;3: 24-32 ။ [PubMed]
Malcolm R, Swayngim K, Donovan JL, DeVane CL, Elkashef A, Chiang N, et al ။ Modafinil နှင့်ကိုကင်း interaction ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2006;32: 577-587 ။ [PubMed]
Malliarakis KD, Lucey P. Social သည်ကျန်းမာရေးကိုဆုံးဖြတ်သည်။ Nurs Econ ။ 2007;25: 368-370 ။ 75 ။ [PubMed]
Maneuf YP၊ Blake R၊ Andrews NA၊ McKnight AT ။ K သည် gabapentin အားဖြင့်လျှော့ချ+- ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။3အဆိုပါ streptozotocin- ကုသကြွက်၏ caudal trigeminal နျူကလိယကနေ H ကို] -glutamate ။ br J ကို Pharmacol ။ 2004;141: 574-579 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Maneuf YP, McKnight AT ။ ပရိုတိန်း kinase ကို C သို့မဟုတ် adenylyl cyclase ၏ activation အောက်ပါကြွက် trigeminal နျူကလိယကနေအချိုမှုလွှတ်ပေးရေး၏ပံ့ပိုး၏ gabapentin အားဖြင့်ပိတ်ဆို့။ br J ကို Pharmacol ။ 2001;134: 237-240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မန်း K, Kiefer က F, Spanagel R ကို, Littleton ဂျေ Acamprosate: မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 1105-1110 ။ [PubMed]
Mardikian PN, Larowe SD၊ Hedden S၊ Kalivas PW, Malcolm RJ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမ်းသပ်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;31: 389-394 ။ [PubMed]
Margolin A၊ Avants SK၊ DePhilippis D၊ Kosten TR ။ HIV-seropositive လူနာများအတွက်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက် lamotrigine ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 1998;24: 85-101 ။ [PubMed]
Mariani JJ, Rosenthal RN, Tross S၊ Singh P, Anand OP ။ အရက်သေစာသောက်ခြင်းကိုကုသရာတွင် gabapentin နှင့် phenobarbital တို့ကိုကျပန်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ထားသောထိန်းချုပ်ထားသည့်စမ်းသပ်မှု။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2006;15: 76-84 ။ [PubMed]
Martinez-Raga J, Knecht C, Cepeda S. Modafinil: ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအတွက်အသုံးဝင်သောဆေးလား။ neuropharmacological, စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2008;1: 213-221 ။ [PubMed]
ဘိန်းမှထုတ်ယူခြင်းကိုကုသရာတွင် Martinez-Raga J၊ Sabater A၊ Perez-Galvez B၊ Castellano M၊ Cervera G. အပို - gabapentin ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;28: 599-601 ။ [PubMed]
လူနာလှုံ့ဆျောမှု၏အခန်းကဏ္:: ပါးစပ် acamprosate ၏ပါးစပ် acamprosate အပေါ် Mason BJ၊ Goodman AM၊ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2006;40: 383-393 ။ [PubMed]
Mason ဆို BJ, Heyser CJ ။ Acamprosate: အရက်မှီခိုမှု၏ကုသမှုအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံ neuromodulator ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2010a;9: 23-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mason ဆို BJ, Heyser CJ ။ အရက်သေစာမှီခိုမှု၏ကုသမှုအတွက် acamprosate ၏ neurobiology, လက်တွေ့ထိရောက်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး။ ကျွမ်းကျင်သူ Drug Saf ။ 2010b;9: 177-188 ။ [PubMed]
Mason BJ, Lehert P. လက်ရှိ subsyndromal စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများသို့မဟုတ်အရက်သေစာမှီခိုကုသမှုရလဒ်များနှင့်ထိရောက်မှု acamprosate အပေါ်အတိတ်စိတ်ပညာ၏ဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2010;19: 147-154 ။ [PubMed]
Mason ဆို BJ၊ Light JM၊ Williams LD၊ Drobes DJ ။ gabapentin ၏သက်ရောက်မှုများအရက်မှီခိုမှုအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတားမြစ်ထားသောလူသားဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာချက်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009;14: 73-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McBean GJ ။ ဦး နှောက်နှင့်ဆိုင်သော cystine စားသုံးမှု - သယ်ယူပို့ဆောင်သူနှစ် ဦး ၏ပုံပြင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2002;23: 299-302 ။ [PubMed]
Mcgeehan AJ, Olive MF ။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဒြပ်ပေါင်းများသည်အက်သနောနှင့်ကိုကင်းတို့အတွက်အေးစက်သောနေရာတစ်ခုထက် ပိုမို၍ မော်ဖင်းအကိုက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်တားဆီးပေးသည်။ br J ကို Pharmacol ။ 2003;138: 9-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mcgeehan AJ, Olive MF ။ ကိုကင်း - သွေးဆောင်ကိုကင်း၏ကို attenuation acamprosate အားဖြင့်ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2006;17: 363-367 ။ [PubMed]
Melendez RI, Vuthiganon J, Kalivas PW ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် extracellular အချိုမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: cystine အချိုမှုဖလှယ်ခြင်းနှင့်ငါ metabotropic အချိုမှု receptors အာရုံစိုက်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005;314: 139-147 ။ [PubMed]
Michopoulos I, Douzenis A, Christodoulou C, Lykouras L. Topiramate သည် alprazolam စွဲလမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;7: 265-267 ။ [PubMed]
Minozzi S, Amato L, Davoli M, Farrell M, Lima Reisser AA, Pani PP, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် anticonvulsants ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗျာ 2008 CD006754 [PubMed]
Miranda R၊ Jr၊ MacKillop J, Monti PM, Rohsenow DJ, Tidey J, Gwaltney C စသည်တို့နှင့်တူညီကြသည်။ topiramate ကိုသောက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်အရက်သေစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှု - ပဏာမဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 489-497 ။ [PubMed]
Montoya ID, Vocci F. စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်ဆေးဝါးအသစ်။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ်။ 2008;10: 392-398 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Moran MM, McFarland K, Melendez RI, Kalivas PW, Seamans JK ။ cystine / glutamate လဲလှယ်မှုသည် metabotropicglutamate receptor ၏ presynaptic တားဆီးမှုအားကိုကင်းရှာဖွေခြင်းအားတားဆီးပေးသည်။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 6389-6393 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Morley KC, Teesson M, Reid SC, Sannibale C, Thomson C, Phung N, et al ။ အရက်သေစာမှီခိုမှုကုသမှုတွင် Naltrexone နှင့် acamprosate နှိုင်းယှဉ်ချက်ပေါင်းစုံ - အလယ်ဗဟို၊ ကျပန်း၊ မျက်စိကန်းသော၊ စွဲလမ်း။ 2006;101: 1451-1462 ။ [PubMed]
Moussawi K ကို, Kalivas PW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် Group မှ II ကို metabotropic အချိုမှု receptors (mGlu2 / 3) ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2010;639: 115-122 ။ [PubMed]
Moussawi K, Pacchioni A, Moran M, Olive MF, Gass JT, Lavin A, et al ။ N-Acetylcysteine ​​သည်ကိုကင်း - သွေးဆောင် metaplasticity ကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ နတ် neuroscience ။ 2009;12: 182-189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Myers KM, Carlezon WA, Jr, စိတ်ရောဂါရောဂါအတွက်မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းမှုအခြေခံသည့်ကုထုံးများတွင် Davis M.Glutamate receptors ။ Neuropsychopharmacology ။ 2011;36: 274-293 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Myers KM, Davis M. ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးသုဉ်းခြင်းနည်းလမ်းများ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;12: 120-150 ။ [PubMed]
Myrick H, Anton R, Voronin K, Wang W, Henderson S. လက်တွေ့စမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် gabapentin နှင့် gabapentin တို့၏နှစ်ဆမျက်စိကွယ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 221-227 ။ [PubMed]
ကိုကာကိုလာမှီခိုမှုကိုကုသရာတွင် Myrick H၊ Henderson S၊ Brady KT, Malcolm R. Gabapentin J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;62: 19-23 ။ [PubMed]
Myrick H ကို, Malcolm R ကို, Brady KT ။ Gabapentin အရက်သောက်ခြင်းကုသမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;155: 1632 ။ [PubMed]
et al Myrick H ကို, Malcolm R ကို, Randall PK, Boyle အီး, Anton RF, Becker က HC ။ gabapentin ကို Lorazepam နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ကြိမ်မျက်စိကွယ်ခြင်းသည်အရက်ဖြတ်ခြင်းကုသမှုဖြစ်သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2009;33: 1582-1588 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Naassila M, Hammoumi S, Legrand E, Durbin P, Daoust အမ်ယန္တရား acamprosate ။ ကြွက် ဦး နှောက်ထဲမှာ spermidine- အထိခိုက်မခံ acamprosate binding site ကို၏အပိုင်းဗြဲစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22: 802-809 ။ [PubMed]
Nic Dhonnchadha BA, Szalay JJ, Achat-Mendes C, Platt DM, Otto MW, Spealman RD, et al ။ D-cycloserine သည်မျိုးသုဉ်းမှုလေ့လာသင်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်ရယူခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 357-367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Niehaus JL၊ Cruz-Bermudez ND, Kauer ဂျေအေ။ စွဲဆေး၏ပလပ်စတစ်: တစ် mesolimbic dopamine Short-circuit ကို? နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2009;18: 259-271 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
O'Brien CP ။ စွဲ၏သက်သေအထောက်အထား -based ကုသမှု။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3277-3286 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သံလွင် MF ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့အလားအလာကုထုံးအဖြစ် Metabotropic အချိုမှု receptor ligands ။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2009;2: 83-98 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သံလွင် MF ။ Group မှ I ၏သိမြင်မှုသက်ရောက်မှုများမှာမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအခြေအနေတွင် metabotropic glutamate receptor ligands ဖြစ်သည်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2010;639: 47-58 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pavlovic Z. Lamotrigine သည်ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက်တွန်းအားနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 2011;23: E32 ။ [PubMed]
Perez de la Mora M၊ Aguilar-Garcia A၊ Ramon-Frias T, Ramirez-Ramirez R, Mendez-Franco J, Rambert F စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကြွက် hypothalamus ၏ချပ်အတွက် GABA နှင့်အချိုမှု၏ပေါင်းစပ်အပေါ်မူးယစ်ဆေး modafinil မြှင့်တင်ရန်သတိဝီရိယ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ neuroscience လက်တ။ 1999;259: 181-185 ။ [PubMed]
Popp RL, Lovinger DM ။ မူလတန်းယဉ်ကျေးမှုအာရုံခံအတွက် NMDA receptors အပေါ်အီသနောနှင့် spermine နှင့်အတူ acamprosate ၏ interaction ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2000;394: 221-231 ။ [PubMed]
စျေး KL, McRae-Clark က AL, Saladin ME, Maria MM, DeSantis SM, Back SE, et al ။ D-cycloserine နှင့် cocaine cue ဓာတ်ပြုခြင်း။ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2009;35: 434-438 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Putzke J, Spanagel R, Tolle TR, Zieglgansberger W. ဒြပ်ဝတ္ထုများသည်ကြွက် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ NMDA1 receptor splice var mRNAs ၏ဖော်ပြချက်ကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 1996;103: XLV-XLVI ။
Raby WN ။ ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းအဘို့အ Gabapentin ကုထုံး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;157: 2058-2059 ။ [PubMed]
Raby WN, Coomaraswamy S. Gabapentin သည်ဆေးခန်းမှနမူနာစွဲသူများအကြားကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;65: 84-86 ။ [PubMed]
Raj YP ။ acamprosate အပေါ်လောင်းကစား: အမှုအစီရင်ခံစာ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;71: 1245-1246 ။ [PubMed]
Rammes, G, Mahal B, Putzke J ကို, Parsons ကို C, Spielmann P ကို, Pestel အီး, et al ။ Anti- တွန်းအားဝင်း acamprosate အားနည်း NMDA- အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ်ပြုမူပေမယ့် memantine နှင့် MK-801 ဆင်တူ NMDA- အဲဒီ receptor subunit စကားရပ် modulates ။ Neuropharmacology ။ 2001;40: 749-760 ။ [PubMed]
Rehm J၊ Mathers C, Popova S, Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Patra J. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ဒဏ်ရာနှင့်အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2009;373: 2223-2233 ။ [PubMed]
Reid MS, Palamar J၊ Raghavan S, Flammino F. Topiramate ၏ cue- သွေးဆောင်စီးကရက်တွန်းအားအပေါ်နှင့်ခေတ္တ abstinent ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်စီးကရက်အပေါ်တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology ။ 2007;192: 147-158 ။ [PubMed]
Reilly MT, Lobo IA, McCracken LM, Borghese CM, Gong D, Horishita T, et al ။ Xenopus oocytes တွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံခံ receptors နှင့်အိုင်းလိုင်းများ၏ acamprosate ၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 188-196 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Reis အေဒီ၊ ကက်စထရို LA၊ Faria R၊ Laranjeira R. တောင့်တင်းသောကိုကင်းမှီဝဲမှုအတွက်ပြင်ပလူနာကုသမှုတွင်လျော့ကျလာသည်။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2008;30: 132-135 ။ [PubMed]
Reissner KJ, Kalivas PW ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုကုသရန်အတွက်အချိုမှုန့် homeostasis အသုံးပြုခြင်း။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2010;21: 514-522 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Richardson K, Baillie A, Reid S, Morley K, Teesson M, Sannibale C ။ acamprosate (သို့) naltrexone သည်အရက်သောက်ချင်စိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ စွဲလမ်း။ 2008;103: 953-959 ။ [PubMed]
Rogawski MA, Loscher ဒဗလျူ။ ဆေးနှင့်ဆိုင်သော neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004;5: 553-564 ။ [PubMed]
Rosner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, Lehert P, Vecchi S, Soyka M. Acamprosate အရက်မှီခိုမှုအတွက်။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗျာ 2010 CD004332 [PubMed]
Ross က, စွဲလမ်းမမှန်များ၏ Peselow အီး Pharmacotherapy ။ Clin Neuropharmacol ။ 2009;32: 277-289 ။ [PubMed]
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်အရက်ကိုမှီခိုနေရသောလူနာများတွင် Rubio G၊ Lopez-Munoz F၊ Alamo C. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ bipolar disorder ။ 2006;8: 289-293 ။ [PubMed]
Rubio G, Martinez-Gras I, Manzanares ဂျေ topiramate အားဖြင့် Impulse ၏မော်ဂျူလာ: အရက်မှီခို၏ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2009;29: 584-589 ။ [PubMed]
Rubio G, Ponce, G, Jimenez-Arriero MA, Palomo T, Manzanares J, Ferre F. အရက်မှီခိုမှုကုသမှုတွင် topiramate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacopsychiatry ။ 2004;37: 37-40 ။ [PubMed]
Rustembegovic A, Sofic E, Tahirovic I, Kundurovic Z. gabapentin ၏လေ့လာမှု - အရက်ရုပ်သိမ်းသည့်လက္ခဏာများ၏ tonic-clonic သိမ်းယူမှုများကုသရာတွင်လေ့လာမှု။ Med Arh ။ 2004;58: 5-6 ။ [PubMed]
et al Santa Ana EJ, Rounsaville BJ, Frankforter TL, Nich C, Babuscio T, Poling J ။ D-Cycloserine သည်နီကိုတင်းမှီခိုနေသည့်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2009;104: 220-227 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sari Y, Smith KD, Ali PK, Rebec GV ။ Glt1 ၏ Upregulation သည်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူအား cue-induced reinstatement attenuates J ကို neuroscience ။ 2009;29: 9239-9243 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schnoll RA, Wileyto EP, Pinto A, Leone F, Gariti P, Siegel S, et al ။ နီကိုတင်းမှီခိုမှုအတွက် modafinil ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာထ။ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008;98: 86-93 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shearer J, Darke S, Rodgers C, Slade T, van Beek I, Lewis J, et al ။ မက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုမှုအတွက် modafinil (တစ်နေ့လျှင် 200 မီလီဂရမ်) ကိုမျက်စိကန်းသော၊ စွဲလမ်း။ 2009;104: 224-233 ။ [PubMed]
Sheinin A, Shavit S, Benveniste M. Subunit ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် NMDA တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist D-cycloserine ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား။ Neuropharmacology ။ 2001;41: 151-158 ။ [PubMed]
Shen YC ။ lamotrigine နှင့်အတူမွှန်မှီခို၏ကုသမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;31: 769-771 ။ [PubMed]
Shimoyama M, Shimoyama N, Hori Y. Gabapentin သည်ကြွက်၏ dorsal horn တွင် glutamatergic excitatory neurotransmission ကိုသက်ရောက်သည်။ နာကျင်မှု။ 2000;85: 405-414 ။ [PubMed]
Sitges M, Chiu LM, Guarneros A၊ Nekrassov V. Nai အပေါ် carbamazepine, phenytoin, lamotrigine, oxcarbazepine, topiramate နှင့် vinpocetine အကျိုးသက်ရောက်မှုများ+ ချန်နယ် -mediated လွှတ်ပေးရန်3Hippocampal အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင် H ကို] အချိုမှု။ Neuropharmacology ။ 2007;52: 598-605 ။ [PubMed]
Snyder JL, Bowers TG ။ ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဆွေမျိုးအကျိုးကျေးဇူးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အရက်မှီခို၏ကုသမှုအတွက် acamprosate နှင့် naltrexone ၏ထိရောက်မှု: ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2008;34: 449-461 ။ [PubMed]
Spanagel R. အရက် - မော်လီကျူးဇီဝကမ္မဗေဒမှစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူသို့စနစ်များချဉ်းကပ်သည်။ Physiol ဗျာ 2009;89: 649-705 ။ [PubMed]
Spanagel R, Pendyala, G, Abarca C, Zghoul T, Sanchis-Segura C, Magnone MC, et al ။ နာရီဗီဇ Per2 glutamatergic system ကိုလွှမ်းမိုးပြီးအရက်သုံးစွဲမှုကို modulates ။ နတ် Med ။ 2005;11: 35-42 ။ [PubMed]
Tata AL, Kockler DR ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမူးရူး - စားရောဂါအဘို့အ Topiramate ။ အမ်း Pharmacother ။ 2006;40: 1993-1997 ။ [PubMed]
Teoh H, Fowler LJ, Bowery NG ။ ကြွက်ကျောရိုး၏ dorsal ဦး ချို၏ချပ်ကနေ endogenous အမိုင်နိုအက်ဆစ်၏လျှပ်စစ် - evoked လွှတ်ပေးရန်အပေါ် lamotrigine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology ။ 1995;34: 1273-1278 ။ [PubMed]
Thanos PK, Bermeo C, Wang GJ, Volkow ND ။ D-Cycloserine သည် C57BL / c ကြွက်များတွင်ကိုကင်း - သွေးဆောင်မှုအခြေအနေကို ဦး စားပေးသည့်မျိုးသုဉ်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009;199: 345-349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Thavorncharoensap M၊ Teerawattananon Y၊ Yothasamut J, Lertpitakpong C, Chaikledkaew U. အရက်သုံးစွဲမှု၏စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှုကိုယခင်မူဝါဒ။ 2009;4: 20 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Torregrossa MM, Sanchez H ကို, တေလာ JR ။ D-cycloserine သည် Pavlovian ကိုကိုကင်းပျောက်ကင်းမှုအခြေအနေကိုတိတိကျကျလျှော့ချသည်။ J ကို neuroscience ။ 2010;30: 10526-10533 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tzschentke TM, Schmidt WJ ။ စွဲအတွက် glutamatergic ယန္တရားများ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;8: 373-382 ။ [PubMed]
Umhau JC, Momenan R, Schwandt ML, Singley E, Lifshitz M, Doty L, et al ။ တစ် ဦး ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ဆေးပညာလေ့လာမှု: detoxified အရက် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဗဟိုအချိုမှု၏သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy အစီအမံအပေါ် acamprosate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 1069-1077 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Uys JD, LaLumiere RT ကို။ အချိုမှုန့်: ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအတွက်ဆေးဝါးကုထုံးဆိုင်ရာနယ်ပယ်သစ်။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2008;7: 482-491 ။ [PubMed]
Volkow ND, Fowler JS, Logan J, Alexoff: D, Zhu W, Telang F, et al ။ ယောက်ျား၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine နှင့် dopamine transporters များအပေါ် modafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2009;301: 1148-1154 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Voris J, Smith NL, Rao SM, Thorne DL, Flowers QJ အီသနောဆုတ်ခွာ၏ကုသမှုများအတွက် Gabapentin ။ Subst Abus ။ 2003;24: 129-132 ။ [PubMed]
Vosburg SK, Hart CL, Haney M, Foltin RW ကိုကင်း - မှီခိုလူသားမြားသအတွက် memantine ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုအကဲဖြတ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005;79: 257-260 ။ [PubMed]
Waldmeier PC, Baumann PA, Wicki P, Feldtrauer JJ, Stierlin C, Schmutz M. အလားတူအာနိသင်ရှိသော carbamazepine, oxcarbazepine နှင့် lamotrigine သည် glutamate နှင့်အခြား neurotransmitter များထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးရာတွင်အလားတူစွမ်းရည်ရှိသည်။ အာရုံကြော။ 1995;45: 1907-1913 ။ [PubMed]
ကြွက် cortex နှင့် striatum အတွက် veratridine အားဖြင့်ထုတ်ဖော် extracellular အချိုမှုတိုးပွားလာအပေါ် carbamazepine, oxcarbazepine နှင့် lamotrigine ၏ Waldmeier PC ကို, Martin P, Stocklin K ကို, Portet ကို C, Schmutz အမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Naunyn Schmied Arch Pharmacol ။ 1996;354: 164-172 ။ [PubMed]
ဝမ် SJ, Sihra TS, Gean PW ။ ဗို့အား - activated ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်းလှုပ်ရှားမှု၏ဖိနှိပ်မှုအားဖြင့်အထီးကျန် cerebrocortical အာရုံကြောဆိပ်ကမ်း (synaptosomes) မှအချိုမှုလွှတ်ပေးရေး Lamotrigine တားစီး။ Neuroreport ။ 2001;12: 2255-2258 ။ [PubMed]
Weiss RD, O'Malley SS, Hosking JD, Locastro JS, Swift R. အရက်ကိုမှီခိုနေသည့်လူနာများသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုတုံ့ပြန်မှုရှိပါသလား။ COMBINE လေ့လာမှုမှရလာဒ်များ။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008;69: 878-884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
White WD, Crockford D, Patten S, El-Guebaly N. ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် gabapentin နှင့် bupropion SR တို့၏ကျပန်းပွင့်လင်းမြင်သာသောရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ Res ။ 2005;7: 809-813 ။ [PubMed]
Winther LC, Saleem R, McCance-Katz EF, Rosen MI, Hameedi အက်ဖ်အေ, Pearsall HR, et al ။ လူ့ဘာသာရပ်များရှိကိုကင်းအားအပြုအမူနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအပေါ် lamotrigine ၏သက်ရောက်မှုများ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2000;26: 47-59 ။ [PubMed]
Wisor JP, Eriksson KS ။ modafinil ၏ယန္တရားမြှင့်တင်ရေးအတွက်ပါတီအားအတွက် Dopaminergic-adrenergic interaction က။ neuroscience ။ 2005;132: 1027-1034 ။ [PubMed]
ရှီ ZX, Gardner EL ။ psychostimulant စွဲ၏ကုသမှုများအတွက်အယူအဆ - မောင်းနှင်ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2008;1: 303-327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zack M က, Poulos CX ။ မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့် Impulsivity နှင့်အတူရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်တိုတောင်းလောင်းကစားမှုဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ် atypical လှုံ့ဆော် modafinil ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2009;23: 660-671 ။ [PubMed]
Zahm DS ။ စွဲ၏ကုသမှုမှ Pharmacotherapeutic ချဉ်းကပ်မှု: မြဲစိန်ခေါ်မှုများ။ Mol Med ။ 2010;107: 276-280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zeise ML, Kasparov S, Capogna M, Zieglgänsberger W. Acamprosate (calciumacetylhomotaurinate) သည်ကြွက်၏ neocortex တွင် postsynaptic အလားအလာများကိုလျော့နည်းစေသည် - excitatory amino acids receptors ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပါဝင်မှု EUR J ကို Pharmacol ။ 1993;231: 47-52 ။ [PubMed]
Zeise ML, Kasparow S, Capogna M, Zieglgänsbergerဒဗလျူကယ်လ်စီယမ် diacetylhomotaurinate (CA-AOTA) သည်စသည်တို့အတွင်းရှိကြွက် neocortex ရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Prog Clin Biol Res ။ 1990;351: 237-242 ။ [PubMed]